မညှာမတာ – My Blog
မှနျမှနျတဈယောကျ မိခငျဖွဈသူကစူလိုကျသဖွငျ့ စူပုတျပွီး အိမျပွငျထှကျလာသညျ။ အသကျ ၁၈နှဈ အရှယျ မှနျမှနျဟာ နမညျနဲ့လိုကျအောငျ ဥစ်စာပေါရုပျခြော လှမျးလြှောကျတိုငျး ဘယျညာယိမျးနတေဲ့ တငျကွီးနှဈလုံးနဲ့ နိုးနှဈလုံးဟာ အရှယျနဲ့မလိုကျအောငျ ဖှံဖွိုးလှသညျ။ သမီးဘယျသှားမလို့လဲ မကျြနာကစူပုတျနတောဘဲ ဘာလဲ သမီးအမဆေူလိုကျလို့လား… လာလာအဖနေဲ့ပွနျလိုကျခဲ့…. အဖဆေိုလို့ အဖရေငျးတော့မဟုတျပါဘူး မှနျမှနျ ၁နှဈခှဲအရှယျမှာ မှနျမှနျအဖဟော ယာဉျတိုကျမှုဖွငျ့ ဆုံးသှားပွီးနှဈလအကွာမှမိခငျဖွဈသူဟာ ကိုမြိုး ဆိုတဲ့လူနဲ့ပေါငျးသငျးခဲ့တာပါ.အသကျ၃၀ အရှယျသာရှိသေးတဲ့ ကိုမြိုးဟာ အရပျရှညျရှညျထောငျထောငျမောငျးမောငျနှငျ့ အလှနျစိတျကွီးတကျသူပါ..မှနျမှနျက လညျး ငယျငယျထဲက ပထှေးလကျပျေါမှာကွီးလာတာဆိုတော့ပထှေးကိုဘဲ အမထေကျပငျခဈြကွောကျရိုသေ နရေသညျ။ အခုလဲကွညျ့ ပထှေးရငျခှငျထဲဝငျပွီး ဖကျထားရှာလသေညျ။
လာပါသမီးရယျ ဘာမှမကွောကျနဲ့ ဖဖေတေဈယောကျလုံးရှိပါတယျ။လာအိမျပွနျမယျ ဆိုပွီ… ပထှေးလကျ ကိုဆှဲပွီး အိမျပွနျ လိုကျသှားသညျ့… ။ ကိုမြိုးနဲ့ မှနျမှနျအိမျပွနျရောကျသညျနှငျ့ မှနျမှနျအမဟော အဝတျစားထုတျကိုစှဲပွီး…ကိုရေ…နယျကအဒျေါအသဲအသနျဖွဈလို့အာ့တာမေ လိုကျသှားလိုကျအုံးမယျ…. အေးအေး,။ မှနျမှနျကတော့ ရငျထဲကပငျအဒျေါဖွဈသူကိုကွိတျ၍ကြေးဇူးတငျနသေညျ ဖေ. သမီးအပေါကျထပျတကျတော့မယျ အေးအေး သမီး…. ။ ပထှဖွေဈသူ ကိုမြိုးလဲ အပျေါထပျတကျသှားတဲ့မယာပါသမီးမှနျမှနျရဲ့ ဟနျခကျြညီစှာ ဘယျညာရိမျးနတေဲ့ တငျသားတကေိုကွညျ့ရငျး… . မှနျမှနျ.မှနျမှနျ တဈနတေ့ဈခွားပိုပိုပွီးတော့တောငျ ဖငျတရေငျတလှေလာပါလား ကိုမြိုး မှနျမှနျရဲ့ ဖငျတကေိုကွညျ့ရငျးအခနျးသို့ဝငျပွီး ဂှငျထုနလေိုကျသညျ။ အလုပျကမောမောနဲ့ပွနျလာပွီး ဂှငျထု လိုကျဖွငျ ဂှငျးထုးရငျနဲ့ပငျကုတကျပညျေအိပျမောကွလနေပွေီ။
ည ခွောကျ နာရီထိုးတာနဲ့ မှနျမှနျ လဲထမငျးဝိုငျးပွငျပွီးပထှေးဖွဈသူ ကိုမြိုးကိုနိုးရနျအခနျးထဲသို့ ဝငျလိုကျသညျနှငျ. လီးကိုတဈခါမှမမွငျဘူးသေးသော အပြိုရိုငျးလေး မှနျမှနျ တဈယောကျအသကျရူသနျတမွေနျလာပွီး တဈခါမှမခနျးစားဖူးသေးသောခံစားမှုမြိုးကို ခံစားမိပွီးအဖုတျကိုလကျနဲ့ပှတျရငျး ဖီး တတေကျနတော ပထှေးဖွဈသူနိူးနတောကိုပငျ သတိမထားမိ.. မှနျမှနျ… ဟဲ့မှနျမှနျ ပထှေးဖွဈသူကိုမြိုးလဲရလာ တဲ့အခှငျ့ရေးကို လပျလှတျမခံဘဲ စိတျတြုနသေောအနထေားဖွငျ့ မယာပါသမီးမှနျမှနျကို ချေါလိုကျသညျ မှနျမှနျ လညျးလနျ့၍ ပွနျပငျမထူးရဲ ..။ ဟဲ့ငါချေါနတောမကွားဘူးလား…. ဟုတျဟုတျ ကွားပါတယျဖဖေေ… ညညျးငါ့အခနျးထဲဝငျပွီး ဘာလုပျနတောလဲ. ဘာမှမလုပျပါဘူး…သမီးဟိုလေ..ဟိုဟာ .. ဟိုတဒေီတလေုပျမနနေဲ့ နငျလုပျနတောငါအကုနျလုံးမွငျတယျနငျငါ့လီးကိုကွညျ့ပွီး နငျ့အဖုတျကိုလကျနဲ့ပှတျနတောမမွငျဘူးထငျနလေား….။
မဟုတျပါဘူး ဖရေယျ. .. ဘာမှငါ့ကိုလာမလိမျနဲ့ ညညျးလိမျရငျပိုဆိုးမယျနျော မှနျမှနျဖွစေမျး…ဟုတျပါတယျ…ဘာဟုတျပါတယျလဲ ပွညျပွညျ့စုံစုံဖွေ…. သမီး အဖေ့ ဟိုဟာ ဟိုဟာ..ကို ဟိုဟာဒေ ဒီဟာဒေ လာပွနျပွီလား ငါစိတျတိုလာပွီနျော ဟုတျ ဟုတျသမီးအဖလေီ့းကိုကွညျ့မိပါတယျ… အေး ညညျးအပွဈကိုညညျးသိတယျနျော… ဟုတျ သိပါတယျဖေ….. သှားမွနျမွနျ ခွံအပွငျမှာတုတျသှားကောကျခဲ့ရီ…ဟုတျ..ဟုတျ မှနျမှနျ လဲကွောကျကွောကျဖွငျ့ ခွံပွငျကိုပွထှေကျခဲ့သညျ.. မယားပါသမီး မှနျမှနျပွေးသှားပုံကိုကွညျ့ရငျး ကိုမြိုတဈယောကျ ပိတိတဖွေငျ့ကွညျ့နလေသေညျ (စှဲရတော့မယျ) ခွံပွငျမှဝါးခွမျးပွားတှသေ့ဖွငျ မှနျမှနျတဈယောကျတုံ့ဆိုငျးမနဘေဲ အိမျထဲသို့အမွနျဝငျပွီး ပထှေးဖွဈသူလကျထဲကိုထညျ့ပေးလိုကျသညျ။ မှနျမှနျ ရှကေို့တိုးခဲ့စမျး အကွောကျလှနျနသေဖွငျ့ မှနျမှနျ ရှပေ့ငျမတိုးရဲ ကိုမြိးလဲဒေါသထှကျပွီး..ဖွနျး..ဖွနျး..ဆိုနှဈခကျြရိုကျခွလိုကျသညျ..။
မှနျမှနျလဲနာလှနျး သဖွငျ့ငို့လညျးငိုရှမေ့တိုးရငျ ထပျပွီးရိုကျခံရမှာစိုးသဖွငျ့ ရှကေို့တိုးခဲ့သညျ လကျမွောကျပွီး ဟိုဘကျလညျ့ မှနျမှနျတဈရောကျ ပထှေးဖွဈသူကိုကွောကျလှသဖွငျ့ လကျကိုမွောကျပွီး ပထှေးနဲ့ ဘေးဇောငျးအနထေားသို့လညျ့လိုကျသညျ။ပထှေးဖွဈသူကိုလှမြိုးက မှနျမှနျရဲ့ စကတျကို စှဲမလိုကျသညျနှငျ မှနျမှနျလညျး လကျကိုအောကျပွနျခွပွီး စကတျကိုအောကျသို့ပွနျဆှဲခလြိုကျသညျ။ နငျ့ကိုလကျမွောကျထားလို့ပွောနတောနငျ နားမလညျဘူးလား ဖွနျး ဖွနျး ဖွနျး…. သုံးလေးခကျြရိုကျလိုတာ မှနျမှနျလညျး မတျတပျပကျမရပျနိုငျ ခှလေပျြကွသှားသညျ။ ဟဲ့ မကျြရကေိုအခုသုတျ. ပွနျပွီးမတျတပျရပျစမျး…ဟုတျ ဟုတျ…ညညျးကအတကျကောငျးတတေပျနတော ဆိုတော့ငါကဆုံမပေးရမှာပေါ့..နငျ့ကိုဖငျလှနျပွီးရိုကျမလို့ စကတျတကေ ရှုပျတယျ စကတျကိုခြှတျပွီးလကျမွောကျထား….. မှနျမှနျတဈယောကျဘာလုပျလို့ဘာကိုငျရမှနျးမသိ….အိမျနရေငျဖွဈသဖွငျ့ ပငျတီနဲ့ ဘရာ မဝတျထား။
တကယျလို့စကတျခြှတျလိုကျရငျမိမှေးတိုငျးဖမှေးတိုငျးကိုတုံးလုံးဖွဈတော့မညျ…မခြှတျပွနျရကျလညျး ပိုပွီးအရိုကျခံရတော့မညျ။ ဟဲ့ ငါပွောနတောမကွားဘူးလား. သမီးမှာ ဟိုဟာ… လာပွနျပွီလားဟိုဟာ. ခြှတျဆိုခြှတျ..မခြှတျလို့ကတော့ငါ့အကွောငျးကောငျးကောငျးသိမယျ.။ မှနျမှနျလညျး ရှပျရှပျနဲ့ပငျ စကတျကို ခြှတျခလြိုကျသညျ…လကျမွောကျပွီး ငါ့ဘကျလှညျ့စမျး.. မှနျမှနျရှကျရှကျနဲ့ပငျမကျြစိမှိတျပွီးကိုမြိုးဘကျလှညျ့လိုကျသညျ့… လှလိုကျတဲ့အဖုတျ….ကိုမြိုးလညျးဘေးကခုနျကိုမှနျမှနျရှမှေ့ာယူထိုငျပွီးမှနျမှနျရဲ့အဖုတျလေးကို ပှတျကွညျ့လိုကျသညျ… မှနျမှနျလဲတဈခါမှအကိုငျမခံဘူးသဖွငျ့ ကိုမြိုးလကျကို လနျ့ပွီးဖယျလိုကျမိသညျ။ ကိုမြိုးလဲဒေါသထှကျပွီး လကျကိုသုံးခကျြရိုကျလိုကျသညျ။ဖွနျး…ဖွနျး…ဖွနျး နောကျဆို ပွနျခအြုံးမလား ပွနျခအြုံးမလား….. မခြ တော့ပါဘူးဖရေယျ. လာငါ့နောကျလိုကျခဲ့ဆွိုပီး ကိုမြိုးမနကျတိုငျး ဘားခိုနတေဲ့ ဘားတနျးမှာလကျကို ပဝါပါးနဲ့ပတျပွီး ကွိုးတုတျထားလိုကျသညျ။
မှနျမှနျမတော့အငိုနဲ့ပငျ ပထှေးဖွဈသူကိုမြိုးလဲ နောကျတဈကွိမျခုနျပွနျယူပွီး မှနျမှနျရှမှေ့ာထိုငျလိုကျပွနျသညျ။ ခုနကငါလီးကိုကွညျ့ပွီးပှတျနတော ဒီအဖုတျ ဟလား..ပှတျပေးရမှာပေါ့ဆိုပွီး.. မှနျမှနျအဖုတျလေးကိုအပျေါအောကျပှတျဆှဲနလေိုကျသညျ။ မှနျမှနျတဈယောကျ ဖီး တတေကျပွီး ငိုသံတိတျ၍ညညျးသံလေးမြားပျေါလာသညျ ဟငျး…..အငျး….အငျး……. တျောတျောကွာပှတျပေးပွီး အဖုတျထဲလကျခလယျထိုးထညျ့ကွညျ့လိုကျသညျ။ အမေ…..အား နာတယျ….. အဖနေားတယျ ဖွေးဖွေး… ကိုမြိုးတဈယောကျ မှနျမှနျပွောစကားကို နားမြှမဝငျ လကျခလယျကို ထိုးမွဲတိုငျးထိုးထညျ့နသေညျ… မှနျမှနျမှာ နာလညျးနာကောငျးလဲကောငျး နဲ့ ညညျးညူ၍သာနလေသေညျ.. အငျး….အား……. အား…….. ကောငျးတယျဖေ သမီးမနနေိုငျဘူး သှကျသှကျလေးလုပျပေးပါ အား…ကောငျးတယျ ထညျ့ပါဖေ…အား… မှနျမှနျတဈယောကျ တဈခြီပွီးသှားလသေညျ.။
ကိုမြိုးလညျး မှနျမှနျဖွဈပုံကိုကွညျ့ရငျး ပွုံးစိစိဖွငျ့ မှနျမှနျကို ကွိုဖွပေေးလိုကျသညျ…ကွိုဖွပေေးလိုကျသညျနှငျ့ ပြော့ခှေ၍ လှဲခွလိုကျသညျ။ ကိုမြိုးကတော့ အခနျးထဲဝငျပွီး ကုတငျပေါ ပတျလပျအနထေားဖွငျ့ မှနျမှနျ ကို….. မှနျမှနျ ဒီကိုလာခဲ့စမျး….. ထဖို့ရနျအားမရှိသျောလဲ အရိုကျခံရမှာကွောကျသောကွောငျ့ မှနျမှနျ အားယူ၍အခနျးပွနျဝငျခဲ့သညျ လာကုတငျပျေါတကျပွီ ငါ့လီးစုတျပေးစမျး…. ရှနျ….. မှနျမှနျလနျသှားလသေညျ..နဂိုထဲက အသနျ့ကွိုကျသူမို့ မှနျမှနျတဈယောကျ သု့ ပထှေးရဲ့ လီးကိုစုပျဖို့မပွောနဲ့ အနံပငျ မခံနိုငျ….လီးကိုကွညျ့ပွီးရငျထဲမှာ ပြိုတကျသလိုခံစားနမေိသညျ။ ငါလီးစုပျပေးလို့ပွောနတောမကွားဘူးလား..ထပျအရိုကျခံခွငျနတောလား… မှနျမှနျမှာရှေးခွယျဖို့လမျးမရှိ အရှိကျခံတာထကျစာရငျ လီးစုပျပေးကတာတျောသေး ဟုတှေးပွီး ကုတငျပျေါသိုတကျပွီ ထိုငျနလေိုကျသညျ လီးကိုစုပျမယျသာပွောတာရငျ ထဲမှာအခုထိ မသဒီ။ ဟဲ့လုပျလေ မွနျ မွနျ ငါလီးကို သခွောကိုငျပွီးစုပျ…။
သခွောမစုပျလို့ကတော့ နာမယျသာမှတျ…. မှနျမှနျ တဈယောကျ ပထှေးရဲ့ လီးကိုကိုငျပွီး ပါးစပျဝတငျတေ့၍သာထားသညျ ကိုမြိုးရဲ့လီးဟာ အရှညျ ၆ လကျမ လုံးပတျ ၃လကျမခှဲလောကျရှိသညျ့ လရဲ့ထိပျမှာ လရညျ တေ ကပျနသေဖွငျ မှနျမှနျအဖို့ စုပျရနျအဆငျမပွေ ပွို့ပွို့၍သာနသေညျ။ ကိုမြိုးက အသံမာကွီးဖွငျ့… ပါးစပျထဲထညျ့မှာဖွငျ့မထညျ့ဘဲဘာလုပျနတောလဲ…အဲ့တော့မှမှနျမှနျလညျး လီးကိုရှံရှာ သောလညျး ကွောကျကွောကျဖွငျပငျ ပါးစပျထဲထညျ့လိုကျသညျ စိတျထဲမှာ ပြိုအနျခွငျသျောလဲ စိတျကို မနဲထိနျးပွီး သကျ၍စုပျပေးနသေညျ။ ကိုမြိုးကတော့ အရသာထူးတှပွေီ့းမိနျးနလေသေညျ… စုပျ စုပျ အားရပါးရစုပျ …အား…..စုပျစမျးပါ….အားရပါးရစုပျ….။ ကိုမြိုးကာမစိတျအထှတျအထပျသို့ ရောကျနလေပွေီ…… အားသမီး ကောငျးတယျ စုပျ..စုပျ…စုပျ… အားရပါးရစုပျစမျး….. ကိုမြိုးပွီးခွငျလာပွီ…….မှနျမှနျရဲ့ခေါငျးကို လကျနှဈဖကျဖွငျကိုငျပွီး သုံးလေးခကျြစောငျ့လိုးလိုကျတာ။
ကိုမြိုး မှနျမှနျ ပါးစပျထဲမှာပငျ လရညျမြားပနျးထညျ့လိုကျပွီး ခေါငျးကိုဖိထားလိုကျသညျ။ မှနျမှနျမှာ ထှေးထုတျဖို့ လီးကပါးစပျထဲမှာတနျးလနျး…. ကိုမြိုးက နှာခေါငျးပိတျပွီး လရညျကို မြိုခခြိုငျးလိုကျသညျ……မှနျမှနျလဲ ပထှေးဖွဈသူကိုမလှနျဆနျရဲသဖွငျ့ မမြိုခွငျသျောလညျးမြိုခွလိုကျရသညျ။ လီးကို မှနျမှနျပါးစပျထဲစိမျထားပွီးမှ မှနျမှနျကို ကုတငျပျေါမှာ ပလတျလနျခိုငျးလိုကျသညျ…. မှနျမှနျလဲ ပထှေးဖွဈသူကိုမလှနျဆနျရဲသဖွဈ ပထှေးဖွဈသူပွောသလိုငျနပေေးလိုကျသညျ။မှနျမှနျအပျေါမှ ပထှေးဖွဈသူကိုမြိုး ကတကျခှပွီး အဖုတျထဲကို စတှေး ထှေးထညျ့လိုကျသညျ့။ မှနျမှနျမှာတော့ လီဖွငျ့မဆိုထားနှငျ့ လကျသနျးမြှပငျ မထိုးထညျ့ဖူးသေးသောမိမိဘစောကျပတျကို ကိုအဖရှေယျ ပထှေးက လီးကွီးကွီးဖွငျ့ လို့တော့မညျကိုရငျထဲမှာ တဈဒိနျးဒိနျးခုနျရငျး မကျြစိကိုမိတျပွီး ခေါငျးအုံးကို လကျနဲ့ ကွဈကွဈပါအောငျ စုပျထားလိုကျပွီး ဖို့ရနျအသငျစောငျ့ဆောငျနလေိုကျပွီ… ။
ဒီအခွနေကေို ဘေးမှာခွောငျးကွညျ့နသေူ ကိုမြိုးရဲ့တူခွောငျးကွညျ့နသေညျကို နှဈဦးစလုံးသတိမထားမိ. ကိုမြိုးကတော့…. လီးကို မှနျမှနျရဲ့ အဖုတျမှာတရေ့ငျး အပျေါဆှဲအောကျဆှဲလုပျနသေညျ…မှနျမှနျလညျး ဖီး တတေကျပွီး ညညျသံလေးသဲ့သဲ့ ထှကျလာသညျ… အငျး……အငျငျးး…….ဟငျး…..ဟငျး….. .အဖေ သမီးမနနေိုငျတော့ဘူး လိုးမယျဆိုလဲလိုးပါတော. သမီးမနနေိုငျတော့ဘူး…..ဟငျး သမီးဖွဈသူအခကျြပေးလိုကျသညျနှငျ့ကို မြိုးလဲ လီးကိုအဖုတျထဲ ထိုးထညျ့လိုကျ သတ်တဝါနဲ့ လကျနကျနဲ့မမြှသဖွငျ့။ လီးကမဝငျ ကိုမြိုးလဲ အားစိုကျပွီး ဖိထိုးခွလိုကျရာ…. အား….အမေ…….သပေါပီ……သမီးစကျပတျတော့ ကှဲပါပွီ…အား…နာတယျ…. သမီးတောငျးပနျပါတယျ ဖဖေရေယျ.. သမီးနောကျတဈခါဖဖေလေီးကိုမကွညျ့တော့ပါဘူး…ဟီးးဟီးး ဖဖေလေီးကိုစုပျဆိုလဲ စုပျပေးပါ့မယျ အခုတော့တျောပါတော့….. သမီးစကျပတျတော့ကှဲပါပွီ…… ကိုမြိုးကတော့သမီးဖွဈသူရဲ့စကားကိုဂရုပငျမစိုကျ။
ဒဈတဈဝကျကြျောကြျောမြှသာဝငျသေးသောလီးလို အားနဲ့ဖိ၍ထိုးထညျ့လိုကျသညျ…… အား……အားမလေးသပေါပွီ.အဖရေဲ့… သပေါပွီ.. အား…အား…….အမရေကေယျပါအုံးအမရေယျ…. သမီးစပျပတျတော့ ကှဲပါပွီ အပြိုရိုငျးလေးဘဝကွငျ့သားမရှိဘဲ လီးကွီးကွီးဖွငျအလိုးခံရသဖွငျ့ သှေးစမြားပငျထှကျနလေပွေီ. ဆယျခကျြလောကျဖွေးဖွေးလေး ခုတျလိုကျသှငျးလိုကျလုပျနသေျောလညျး အပြိုမွှေးမှာမပေါကျသေးပါ မှနျမှနျ နာကွငျမှုနှငျအတူ ခံစားမှုတဈမြိုး နာကောငျးကွီးကိုခံစားနရေပွီ…အဲ့အခြိနျမှာဘဲ… ကိုမြိုဟာ လီးတဈဝကျမြှသာ အထုတျအသှငျးလုပျရာကနေ မှနျမှနျခါးကိုညဈပွီး အားကိုထညျ့၍ဖိထိုးခွလိုကျသညျ…… အား……ကှဲပါပွီ……သမီးစကျပတျတော့ကှဲပါပွီ….အားနာတယျ အဖရေယျ ဖွဖွေလေိုးပါ…. သမီးကိုသနားပါအုံးအဖရေယျ…အားသပေါပွီ….. မှနျမှနျတဈယောကျအျောရငျးနဲ့ပငျ ကာမအထှ၌အထပျ ရောကျလာပွီ။
လိုး….. လိုးစမျးပါ…..အဖေ ရယျ…..သမီးစကျပတျကှဲရငျ ကှဲပါစေ….လိုးစမျးပါ….အား….ပွီးတော့မယျ ဖေ….အား ကိုမြိုးနဲ့ မှနျမှနျ နှဈဦးစလုံးပွိုငျတူပွီးလိုကျသညျ။ ကိုမြိုးနှငျ မှနျမှနျ အပွငျးအထနျလိုးပှဲကွညျ့ရငျး ဘေးမှခွောငျးကွညျ့နသေူ အရှိုငျးလဲ စိတျတထေနျပွီး မတျတပျရပျလကျြပငျ ဂှငျထုရငျ အခနျးဝမှာပငျ…. ပွီးသှားလသေညျ။ ဝုနျး……အခနျအဝမှ ထောငျထားသော အမိုကျကို အရှိုငျး ရုတျတရကျဝငျတိုကျမိလိုကျသညျ။ ကိုမြိုးနဲ့ မှနျမှနျလညျးအသံကွားရာဘကျသို့.. လှညျ့ကွညျ့လိုကျရာ.ဟငျ။ အရှိုငျး… အရှိုငျး……။ မှနျမှနျရငျထဲမှာ နာကွငျမှုထကျ မိမိခဈြသူအရှိုငျး ရှမှေ့ာသူဦးလေးကိုမြိုး ပတျပတျဆကျဆကျ လိုးတာ ခံနရေ သညျမို့ မကျြရညျမြားပငျစီးကွနသေညျ.. အရှိုငျးတောငျးဆိုခဲ့စဉျအခါက ခါးခါးသီးသီးငွငျးခဲ့ သျောလညျး အခု အရှိုငျးရှမှေ့ာတငျပထှေးဖွဈသူနဲ့ ပတျပတျဆကျဆကျ လိုးပှဲဝငျနခွေငျးကို ရှကျလညျး ရှကျ…၍ စကားပငျ ပွနျမပွောနိုငျ။
အရှိုငျးလဲခွောငျးကွညျ့ခဲ့စဉျက မိမိခဈြသူမှနျ မသိခဲ့.. အခုတော့…မိမိဦးလေးလိုနသေောမိနျးကလေးဟာသူခဈြသူကောငျမလေးမှနျးသိလိုကျရသဖွငျ့… မကျြရညျမြားပငျ စီးကွနပွေီး…အခနျရှမှေ့ာပငျ…သူခဈြသူဖွဈအငျကို ကွညျ့ပွီးယူကွုံးမရ ဖွဈနလေသေညျ။ ဒီ အခွနေကေိုရိပျမိလိုကျသောကိုမြိုးကအတှေးထဲတဈခု စဉျးစားလိုကျပွီး…..။ ဟောငျ့ အရှိုငျးလာလကှောအထဲဝငျခဲ့….ဒီကောငျမ $ ခြိုးမပွလေို့ ဆုံးမနတော..လာ….လာ….အထဲဝငျခဲ့..။ ဟုတျ.. ဦး.. လာကုတငျပျေါတကျ…. ဟုတျဦး..။ မှနျမှနျကတော့ အရှိုငျးကို မကျြနာမပွဝံ့၍ ခေါငျးကို မကျြလှဲ၍နရေငျး မကျြရညျမြားစီးကွလို့နလေသေညျ….. ကိုမြိုးကတော့မှနျမှနျအဖုတျထဲစိမျထားတဲ့လီးကိုနုတျပွီး ဘကေအဝတျဆှဲယူပွီး လီတှကျပနေသေော.. လရညျမြားကို အဝတျဖွကျ့သုတျရငျး…အမောဖွနေသေညျ။ မှနျမှနျနဲ့ အရှိုငျးကတော့ တဈယောကျမကျြနာ တဈယောကျလှဲရငျး အတှေးကိုစီနဲ့…ပငျ။ အရှိုငျး ဒီဘကျလှညျ့လလေကှော…. မှနျမှနျ အရှိုငျးလီးကို စုပျပေးလိုကျစမျး.။
မှနျမှနျ တဈယောကျအရှိုငျးမှာကို့ခဈြသူတဈယောကျဖွဈသျောလညျး အရှိုငျးခဈြတာကို အသာစီးယူပွီး အမွဲတမျး မာနထားပွီး အနိုငျယူခဲ့လသေညျ။ အခု ကိုအမွဲအသာစီးယူနသေော အရှိုငျး လီးကိုးစုပျပေးရမယျဆိုတော့ အလှနျပငျရှကျနသေညျေ..မစုပျရငျလညျး ပထှေးရိုကျမှာကိုကွောကျလှသဖွငျ ရှကျရှကျနဲ့ပငျ အရှိုငျးလုံခွညျလေးကိုလှနျပွီး…အရှိုငျးလီးကိုစုပျပေးလိုကျသညျ။ အရှိုငျး…နာကွညျးမုနျးတီးမှုနဲ့..ဘာမှပငျပွနျမပွောမကျြနှာထားတငျး၍သာထားလသေညျ။ ဘလို့ဘဲမကျြနထားတငျး၍ထားပါသျောညားလဲမှနျမှနျရဲ့ အစုပျကောငျးလှတဲ့ အခိုကျတနျ့ မှာတငျ အရှိုငျး တဈယော ကာမစိတျတေ ထကွှလာပွီး…အသံမြားပွငျထှကျလာလပွေီး… ကောငျးတယျ စုပျ စုပျ နာနာလေးစုပျ ပွီးတော့စုပျ…… အသံမြားရဲ့ အစုံးမှာ အရှိုငျးတဈယောကျ မှနျမှနျပါးစပျထဲမှာတငျ လရညျမြားပနျးထညျ့လိုကျသညျ…မှနျမှနျလဲ လရညျမြားကိုတဈစကျမကနျြပငျ သောကျခလြိုကျလသေညျ……..။
မှနျမှနျ ဖငျကုနျးစမျး…. ကိုမြိုးရဲ့ စကားသံကွောငျ့ မှနျမှနျတဈယောကျ အရှိုငျးလီးကို စုပျနရောကပငျ ဖငျကုနျးလိုကျပါသညျ။ ဟောငျ့ အဲ့ကောငျမကို နာနာ ဆုံးမလိုကျစမျး….။ မှနျမှနျငါ့လီးစုပျပေးစမျး… မှနျမှနျလညျးဖငျကုနျးနရောကပငျ ကိုမြိုးဘပျလှညျ့ပွီး ကိုမြိုးလီးကိုးစုပျပေးနခြေိနျမှာဘဲ အရှိုငျး က မှနျမှနျရဲ့ အဖုတျထဲ သူ့လီးကိုစောငျ့လိုးလိုကျသညျ…… မှနျမှနျပါးစပျထဲလီးနှငျ့ပွညျ့ကွပျနေ၍အျောလို့ပငျမရ…. အရှိုငျး လိုးခကျြတကေ ကိုမြိုးလို ညငျညငျသာသာမလို့ဘဲတဈခါထဲ စောငျ့ထိုးလိုကျသဖွငျ့မှနျမှနျတစိယောကျမခြိမလှခံစားနရေပွီလပွေီ….. အု့….အငျ့…အငျ့……အငျး…… အရှိုငျး ကာမစိတျတေ အထှတျအထိပျသို့ရောကျလာပွီ…မှနျမှနျ ဆပငျကို ကိုငျပွီး အသကုနျဆောငျ့လိုးနလေိုကျတာ… မှနျမှနျအဖုတျထဲမှ သှေးမြားပငျထှကျကွနလေပွေီ။ အတနျကွာအောငျဆောငျ့ပွီး… အရှိုငျး လီးကိုဆှဲနုတျ၍ ဖငျပေါငျကို စတှေး ထှေးထညျ့လိုကျပါသညျ…ပွဈ…။
ကိုမြိုးကတော့… မှနျမှနျ အစုပျကောငျးမှုကွောငျ့…. မိနျးနဇေဲ……။ မှနျမှနျတဈယောကျ ဖငျကိုအစိမျးသကျသကျလို့ခံရတော့မယျတာတှေး..ရငျး.. ကိုမြိုး ပေါငျကိုတငျးတငျးကွပျစုပျကိုငျထားပွီး..ပေါငျ့ကိုနဲနဲ ကားပေးရငျး.. အသငျ့အနထေ့ား…ဖငျလိုးခံဖို့စောငျ့နလေိုကျသညျ….။ကို မြိုး ထနျလာပွီ……မှနျမှနျခေါငျး ကိုဖိရငျး… စုပျအားရပါးရစုပျ….. .ကိုမြိူးနောကျတဈခြီပွီသှားလပွေီ။ အရှိုငျး.. ဖငျဝမှာတထေ့ားတဲ့ လီးကို… အားနဲ့ဖိထိုးခလြိုကျသညျ…. သတ်တဝါနှငျ့လကျနကျနှငျ့မမြှသဖွငျ့…ထိုးထညျ့၍မရသညျကတဈကွောငျး မှနျမှနျနာမှာကွောကျ၍ ဖငျပေါကျကိုညဈထားသောကွောငျ့ဖွသျသညျ။ အရှိုငျး အိတျထဲမှာပါလာသညျ့….တုနျခါစကျသညျ့ပါလီတု ကိုထုတျပွီး မှနျမှနျ စကျပတျထဲ..ကို ခလုပျနိပျထိုး ထညျ့လိုကျပွီး..မှနျမှနျစိတျပွငျးပွအောငျ…လုပျရငျး ဖငျဝမှာလီးကိုတေ့ လကျတဈဖကျက လုတုကိုကိုငျပွီး ထုတျလိုကျသှငျးလိုကျလုပျနပေါသညျ… ။
မှနျမှနျ…လီတု၏တုနျခါမှုနှငျ့….ဟိုဘကျမှဒေီဘကျမှကွေောငျ့.. ကာမအရာသာကိုအပွညျ့အဝခံစားနပွေီး…. မိမိဖငျလိုးတော့မညျဆိုတာကိုပငျသတိမရ….. ပါးစပျက ညညျးညူသံနှငျ့ အတူ.. အဖုတျမှာ…အရညျတရှဲရှဲနဲ့…ခံကောငျးကောငျး.မိနျးနသေညျ။ မှနျမှနျ စိတျထနျလာသညျနှငျ အရှိုငျးလဲ တုနျခါနူနျး မွငျ့ပွီး လီးတုကို မှနျမှနျအဖုတျထဲ တဆုံးထိုးထညျ့ပွီး မှနျမှနျခါးကိုညဈပွီးလီးကိုဖိထိုးထညျ့လိုကျတာ. အမေ…….ဖငျတော့ကှဲပါပွီ..မှနျမှနျ လီတု၏တုနျခါမှုနှငျ့ မှနေောကျမှုက ခံလို့ကောငျးနရေငျး ဖငျထဲလီးထညျ့တာခံလိုကျရတော့ လနျ့ပွီးအျောရငျး မကျြရညျမြားပငျစီးကွနသေညျ။ အမရေယျသပေါပွီ……သမီးတော့..အဖုတျရောစကျပတျရောကှဲပါပွီ……. အောကျကလီးတုကမှနေောကျနလေိုကျတာ…. နာကောငျးရီးဖွဈနသေညျ..။ အရှိုငျးကတော့…မှနျမှနျဘယျလိုဘဲအျောအျော…နာကွညျးနသေောစိတျကွောငျ့မှနျမှနျဖငျကို…. အားစိုကျ၍သာစကျလိုးနသေညျ…။
နငျဖငျအလိုးခံရတာကောငျး…လား…..ဖွနျး…. မေးနတောဖွလေေ… မှနျမှနျအသံမထှကျနိူငျ..လကျဝါးဖွငျ့ ဖငျကိုနောကျတဈခကျြလကျဝငျဖွငျ့အရှိုငျး ရိုကျ၍ ထပျမေးလိုကျသညျ..ဖွနျး…ငါမေးနတောမကွားဘူး…လား….ဖွနျး…ဖွနျး….။ အရိုကျလဲခံရ… လီတုကလဲ မှနေောကျ..နေ ဖငျကလဲပတျပတျဆကျဆကျအလိုးခံရနသေညျ့ကွားမှာ… မှနျမှနျ…မောဟိုကျ၍ ပွနျမဖွနေိုငျ….။ ဖွနျး……ဖွနျး…..ဖွနျး…….ဖွနျး…….ဖွနျး…… အရှိုငျးကတော့ မဖွမေခွငျးရှိကျနဆေဲ……. ဟုတျကောငျး…ကောငျးပါတယျရှငျ…..ရှငျကွိုကျသလိုလိုးပါ…..။ နောကျတဈခါငါ့ကို…အရငျ လိုဆကျဆံအုံးမလား….ဖွနျး….. အရှိုငျးကတော့ အလိုးကွမျးကွမျးဖွငျ့လိုငျးရငျး….လကျကမှနျမှနျတငျပါးကို အားရပါးရရိုကျနပေါသညျ။ ကွောကျပွီလား..ဖွစေမျး…။ ကွောကျပါပွီ….အရှိုငျးရယျ နောကျတာခါ….အနိုငျမကွငျ့တော့ပါဘူး….ကွောကျပါပွီ…ကွောကျပါပွီ……. ။…မှနျမှနျစကျပတျရော အဖုတျရော….ကှဲသှားလပွေီ။
ကိုမြိုး… လီးနောကျတဈဖနျတောငျလာလပွေီ… အရှိုငျးခနနအေုံး…..။ မှနျမှနျလာစမျး ငါ့အပေါ့ကတကျစောငျ့ပေးစမျးလို့ပွောရငျး ဘေးမှတုတျကိုစှဲယူလိုကျသညျ…မှနျမှနျလညျး….ကိုမြိုးကိုကွောကျလှသဖွငျ့….ကိုမြိုပျေါတကျခှပွီး စကျပတျ…ထဲလီးလညျ့ပွီးထိုငျခွလိုကျသညျ….နောကျကနေ အရှိုငျးကလဲ အညိမျမနဘေဲ ဖငျထဲလီးတုထိုးထညျ့လိုကျသညျ….။ မှနျမှနျလေးငါးခကျြပငျ ကိုမြိုးကိုကွောကျလို့သာစောငျ့ပေးနိုငျတော့သညျ့… အာမရှိ….လီးတနျးလနျးနှငျ့…ကိုမြိုးကိုဖကျထားလိုကျသညျ….။ ဖရေယျသမီးကိုသနားပါနျော သမီးမဆောငျ့နိုငျ..တော့ဘူး… အဖကွေိုကျသလိုသာလိုးပါ..သမီးခံပါမယျ… သမီး မဆောငျ့နိုငျတော..လို့…အား……။ မှနျမှနျစကားမဆုံးခငျမှာဘဲ အရှိုငျးက ဖငျထဲလီးတုကိုဆှဲနုတျပွီးအားဆိုကျကာ..မှနျမှနျဖငျထဲ လီးကိုအဆုံးထိုးထညျ့လိုကျသညျ့…… စကျပတျထဲမှာလဲလီးမှာလီးကပွညျ့ကွပျနရေတဲ့အထဲ… အရှိုငျးကပါ ဖငျထဲလီးထိုးထညျ့လိုကျတော့…။
မှနျမှနျ ဘလိုမှပငျမခံစားနိုငျ…မတကျသာတဲ့အခွနေမေို့…အျောယုံပငျအပိုမရှိ..။ အရှိုငျးကတော့….မှနျမှနျဖငျကို မညာမတာ လိုးနေp….အခြိနျတျောကွာ… ဆောငျ့ခကျြမြားလာ သညျနှငျ့ မှနျမှနျတဈယောကျနာကွငျမှုနှငျ့အတူ.နာကောငျးကွီးခံစားနရေpလေ… အား……ကောငျးတယျလို့းလို့……ဖငျကှဲရငျကှဲပါစေ… အားရှိသလို့သာလိုးပါတော့အရှိုငျးရယျ….။ မှနျမှနျ တဈညလုံး ကိုမြိုးနဲ့ အရှိုငျး ပတျပတျဆကျဆကျလိုးပှဲဝငျပွီး..အိပျမောကွနလေသေညျ…..။ မှနျမှနျထစမျး…ငါ့လီးစုပျပွီးစမျး.. မှနျမှနျအိပျခွငျမူးတူးနဲ့ ကိုမြိုးလီးကို..မစုပျခွငျစုပျခွငျနဲ့ စုပျပေးနရှောသညျ….။အား..နောကျကနေ အရှိုငျးက မှနျမှနျ ဖငျပေါကျထဲလီးကို တဈအားဖိလိုးခွလိုကျသညျ..။ အားနာလိုကျတာ အရှိုငျး ရယျဖွေးဖွေးထညျ့ပါ…အဲ့တာ့ စကျပတျမဟုတျဘူး ဖငျပေါကျဟဲ့…။ ဖငျပေါကျလဲမလိုးရဘူးလား…နကျတို့မိနျးမတကေ ဖကျခံဖို့သကျသကျဘဲမှေးလာကွတာ ရှာမရှညျနဲ့ အေးအေးဆေးဆေးညိမျခံနေ မခံလို့ကတော့ ညကထကျပိုနာမယျ..။
အေးပါ..ငါကနငျတို့ရဲ့ ကြှနျမပါနကျတို့လုပျခွငျသလိုသာလုပျပါ…ဒါပမေဲ့ဖွေးဖွေး တော့လိုးနျော…။ မှနျမှနျနငျတျောတျောရှာရှညျတာဘဲငါလီးကိုသခွောစုပျစမျး… ဟုတျဖဖေေ… ။ အငျးဒီလိုပေါ့..ပါးစပျကလဲအညိမျမနနေဲ့ ငါ ဖီးရှိအောငျပွော …ဟုတျ.ကဲ့ပါ ဖဖေရေယျ…သမီးစုပျတာကောငျးလားဟငျ..။ အငျး..ကောငျးတယျသမီးရယျ..စုပျအားရ…အောငျသာစုပျ…..။ အနောကျကနေ.. အရှိုငျးကလညျးမှနျမှနျရဲ့ ဖငျကိုတဈဝုနျးဝုနျးနဲ့ဆောငျ့လိုးနလေိုကျတာ မှနျမှနျ ခမြာအရှိုငျးကိုလဲကွောကျရ ပထှေးကိုလဲ……ကွောကျရနဲ့…အျောလဲမအျောရဲ..နာလဲနာနဲ့ကွိတျမှိတျပွီး ခံနရေငျး…ပထှေးလီးကို တပွှတျပွှတျနဲ့ စုပျနပေေးရရှာသညျ..။ စုပျ..စုပျ…ဖဖေေ ပွီးတော့မယျ.သမီး.. မွနျမွနျလေးစုပျ…အား.ရှီး…ကောငျးတယျစုပျ…..ပွီးပွီ…ပွီးပွီး.. ဆိုပွီး ကိုမြိုးလီးကိုမှနျမှနျ ပါးစပျထဲကနဆှေဲနုတျပွီး မှနျမှနျ မကျြနာပျေါ လရညျမြားသုတျလိမျးပွီး.။ ဒီလိုဘဲနတေိုငျး…သမီးကို…လရညျနဲ့ မကျြနာသဈပေးမယျကွားလား….။
ဟုတျ… ပထှေးကတော့ တဈခြီပွီးသှားပွီမို့ အခနျးထဲကနထှေကျသှားမှဘဲ….။ အရှိုငျးရယျနာလိုကျတာ…ဖွေးဖွေးလိုးပါ..နငျငါ့မသနားဘူးလား။ အား…ကြှတျ..ကြှတျ…နားတယျ… ဖွေးဖွေးလိုးပါ..ရှိုငျးရယျ….,။ မှနျမှနျ နငျငါ့အပျေါက တကျဆောငျ့ပေးစမျး…။ နငျကလညျးဟာ ငါညက တဈညလုံး နငျတို့ လိုးတာ ခံနရေတာ… ပငျပနျနပွေီ. ဘလိုလုပျဆောငျ့နိုငျမှာလဲ..။ နငျအသားမနာစခွေငျရငျ တကျဆောငျ့…။ အေးပါဟာ…ဆောငျ့ဆိုဆောငျ့ပေးပါမယျ ငါ့ကိုတော့မရိုကျပါနဲ့နျော ငါအရိုကျခံရတာတျောတျော နာနလေို့ပါ။ စကားကွောက ရှညျပွနျပွီ.. လာဟိုထကျလှညျ့ပွီး ငါအပျေါတကျခှ.. လီကိုကိုငျပွီး စကျပတျ ဝမှာတပွေီ့း ဖငျထိုငျခြ..လိုကျ..။ အှမျး….. ။ မှနျမှနျ လကျတဈဖကျကလီးကိုကိုငျ စကျပတျကိုတေ့ မကျြစိဆုံမိတျပွီးဖငျထိုငျခလြိုကျပါသညျ.။ အားလားလား..ရှီး ကောငျးလိုကျတာ နာပမေဲ့ ရမကျသှေးတထေကွှနတေဲ့မှနျမှနျတဈယောကျ၁၀မိနဈလောကျ ပုံမနျ ထိုငျလိုကျထလိုကျနဲ့ စောငျ့ပေးနရေငျး…။
အရှိုငျး ငါမောလာပွီဟာ….ငါမဆောငျ့နိုငျတော့ဘူး….. ဖွနျး…ဘာမဆောငျ့နိုငျတာလဲ မွနျမွနျဆောငျ့…ဖွနျး….နှေးလို့ကတော့သမေယျ…ကဖွနျး။ လကျဝါးကွမျးကွီး ဖွငျ့ အရှိုငျး ရိုကျလိုကျတော့မှ..မှနျမှနျ ထပျတှနျ့မတကျတော့ဘဲ ဆောငျ့မွဲဆောငျနရေသညျ။ ဖွနျးး…မွနျမွနျဆောငျ့စမျး…ဖွနျး…မွနျမွနျ စောငျ့ပေးနသေျောလဲ အရှိုငျး ကတမငျတကာ ရိုကျနသေညျ…နာပမေယျလို့…အရိုငျးခံနရေတာကိုက မှနျမှနျ အတှကျ ဖီး ဖွဈနသေညျ …. ဖွနျး…ဆောငျ့..ဖွနျး. မွနျးမွနျဆောငျ့…ဆောငျ့….ငါထနျလာpမွနျမွနျ ဆောငျ့…ဖွနျး..ဖွနျး..ဖွနျး…ဆောငျ့စမျး. ဆောငျ့စမျး..ဆောငျ့စမျး…….။ ပွီးတော့မယျဆောငျ့ဆောငျ့ အား…ရှီးး…ကောငျးလိုကျတာ မှနျမှနျရယျ…ဘာအ ခုမှကောငျးတာလဲ…သူမြားကို မညှာမတာရှိကျပွီးမှကောငျးတယျလာမလုပျနဲ့….ဒီမှာညောငျးလဲညောငျးနပွေီး တငျပါတလေဲနီရဲနပွေီ….။ ငါလီးက ခံလို့ကောငျးလား…မှနျမှနျ..။ မကောငျးဘူး..။
အေးတှကွေ့သေးတာပေါ့ မသာမ ငါလီကို ဂျေါလီထညျ့ပွီး ပါဝါတငျပွီးမှ နှငျ စကျပတျကောဖငျကောကှဲအောငျ ထပျလိုးပွမယျ။ စမီးကစတာကို…ကိုကိုကလညျး….. Noပါ စမရယျ အနျကယျကတော့ noပါ..နောကျတဈခါလိုးရငျ ဖငျကှဲဖို့သာပွငျထား…။ သှားရသှေားခွိုးတော့။ မှနျမှနျ ရခြေိုးခနျးထဲဝငျရငျး မိမိဘဝကိုတှေးရငျးတဈရုံ့ရုံ့နဲ့ငိုပှဲဝငျနရေရှာသညျ။ ဒီအဖွဈအပကျြတှကေို သူ့အမပွေနျလာ အားလုံးဖှငျ့ပွောလိုကျမညျဟုစိတျကရရှေတျရငျ…မိခငျပွနျလာတဲ့အခြိနျ ထိတော့ထား၍သာ စောငျ့နရေရှာလသေညျ…။ မမေေ ရယျ ပွနျလာပါတော့..။သမီး ဘဝကိုလာကွညျ့ပါအုံးမမေေ ရယျ။ ဟဲမှနျမှနျ ရခြေိုးတာကွာ လိုကျရီလား….။ ဟုတျ..ပွီးပွီ ပွီးပွီ…။ ရခြေိုးပွီးရငျ ငါ့စီမွနျမွနျလာခဲ့…။ ဟုတျ..။ ထိုစဉျ…. ဟလို….ဗြာ..ဟုတျကဲ့..ဟုတျကဲ့.။ ကံမကောငျးရှာတဲ့ မှနျမှနျ ဘဝ…. မှနျမှနျအမေ ကား အဲ့စီးဒငျ့ဖွဈပွီး အောကျပိုငျးသသှေားရရှာလသေညျ။ မှနျမှနျအားကိုးရမဲ့လပွေီ….။
ကိုမြိုးကလညျး မှနျမှနျအမလေဈရငျ လဈသလို လီစုပျခိုငျးလိုကျ လိုးလိုကျနဲ့ မှနျမှနျခမြာ မိခငျစိတျဆငျးရဲမှာဆိုး၍မပွောပွနိုငျခဲ့..။ တနတေ့ော့ ကိုမြိုး အရကျတေ အလှနျအကြှနျသောကျလာပွီ… မှနျမှနျအမေ ဒျေါခငျကွညျကို.. ခငျ ကိုတို့မလိုးဖွဈတာတောငျကွာပွီ..ဒီနေ့ ကိုခငျကိုလိုးမယျ…။ ပွောရငျးဆိုရငျး ကိုမြိုးက ခငျ ရဲ့ထမီ ကို စှဲခြှတျလိုကျသညျ.. ဟာ ကို သမီးလေးမွငျသှားရငျ မကောငျးပါဘူး…။ မွငျပစကှော..ဒီမှာငါမနနေိုငျတော့ဘူး……။ ကိုမြိုးက ခငျရဲ့အကငြ်္ီပါစှဲခြှတျလိုကျသညျ..။ကိုကလညျးကှာ ရှကျစရာကွီး ယခုတော့….ဒျေါခငျကွညျ ကိုယျပျေါမှာ အဝတျစားမဲ့နေpလေ..။တဈခါမလုပျဘူးသောကိုမြိူးရဲ့အပွုအမှုထူးဆနျးနသေျောလညျး….ကိုမြိုး အပွူအမှုကို…..ဒျေါခငျကွညျနှဈသကျနသေညျ…။ ဟာ..ကိုကလညျးရှကျစရာကွီး သမီးမွငျသှားရငျမကောငျးဘူး… မွငျပစကှော….ပါးစပျဟထား…..။ ဘာလုပျမလို့လဲ…။ ငါ့လီးကို့စုပျပေးရမယျလေ… ဟာ…ရှံတယျကှာ….။
ကိုမြိုးကတော့ ခပျကွမျးကွမျးပငျ ခကျပါးစပျထဲ လီကို ထိုးထညျ့လိုကျသညျ.။ သခွောစုပျ……ရှာကအညိမျမနနေဲ့သခွောစုပျစမျးပါ…..။ နငျစုပျတာကလဲ အရသာမရှိလိုကျတာ…..။ ကိုမြိူး ဒျေါခငျကွညျ ခွထေောကျကိုကိုငျပွီး ဆှဲလညျ့လိုကျသညျ( ဝမျးလြားမှောကျအနထေား) ခေါငျးအုံးနှဈလုံးဆှဲ ယူပွီး ဒျေါခငျကွညျ အောကျမှာခုပေးလိုကျသညျ… အခုတော့ဒျေါခငျကွညျ လေးဘကျကုနျးထားသလို ဖငျကိုအနှောကျမှာပွဈပွီးစပတျရောဖငျပါ စူထှကျနသေညျ…။ ကိုမြိုးက အပျေါကနေ တကျခှပွီး… ခငျရဲ့ ဖငျဝမှာလီးကိုတေ့ ထားရငျး…ထိုးထညျ့ဖို့ပွငျနသေညျ….။အား..နာတယျမလုပျနဲ့….နာတယျ မလုပျပါနဲ့ကိုရယျ။ ဒျေါခငျကွညျ့..သမီးတဈယောကျသာမှေးလာတာအခုထိ ဖငျမခံဘူးသေး…..။အာ့ကွှပျီ….။ မှနျမှနျ ရမှေနျမှနျ….ဘာလုပျနတောလဲဒီကိုလာစမျး..။ ဟုတျလာပါပွီ…. ကိုမြိူးမှနျမှနျကိုလှမျးချေါလိုကျတော့….. ဒျေါခငျကွညျ မကျြလုံးပွူးသှားသညျ။ ကို ဘာလို့သမီးကိုချေါတာလဲ..။
နငျ့ကိုလိုးကတာ..အရသာမရှိလို့.မှနျမှနျကိုလို့မလို့….မှနျမှနျတခါးဖှငျ့ပွီးဝငျလာသညျ….ကိုမြိုးက သူအမေ ဖငျကိုလိုနတော….အမကေိုယျပျေါမှာလဲ အကငြ်္ီ အဝတျမရှိ….။မှနျမှနျ မကျြစိလေးကလညျ ကလညျနဲ့…၊၊ ဘာလုပျနတောလဲ အဝတျစားတခြှေတျစမျး…. ။ ကိုမြိး သမီးကို မဟုတျတာတလေုပျမခိုငျးနဲ့…. အမရှေမှေ့ာ အဝတျခြှတျခိုငျးတာဆိုတော့မှနျမှနျ အလှနျပငျရှကျနသေညျ….။ဟဲ့ ပွောနတောမကွားဘူးလား….။ ရှငျ ရှငျ လူရုပျမာကြှနျမသမီးကို မဟုတျတာတလြှေောကျမလုပျခိုငျးနဲ့..။ ဒီမိနျးမတျောတျော ရှာရှညျတာပါ…ဖွနျး…။ မှနျမှနျ နငျကိုခြှတျလို့ပွောနတော..နားမပါဘူးလား….။ မှနျမှနျမခြှတျခြှတျခွငျနဲ့ ခြှတျနရေရှာသညျ။ ငါ့လီးကိုနငျအမရှေမှေ့ာ စုပျပေးစမျး….။ မတကျသာတော့..မှနျမှနျ စုပျပေးရရှာတာပေါ့…မှနျမှနျအမကေတော့ ကိုယျ့ရှမှေ့ာကိုသမီးက သူမြားလီးစုပျပေးနရေတော့…သမီးဘဝကိုကွညျ့ရငျး…အဖွဈဆိုးလိုကျခညျြလားသမီးရယျ….။
စုပျသခွောစုပျ… ဟုတျ….ဘလိုလဲအရသာရှိလား ဟုတျရှိပါတယျ။ ကိုမြိုးဗီတိုထဲက တုနျခါစကျ ပါလီးတုကိုစှဲနုတျလိုကျပွီး….. ဒျေါခငျကွညျ့ဖငျထဲ ထိုးထညျ့လိုကျသညျ…. အို…. နာလိုကျတာ…ကြှတျ..ကြှတျ လီကွီးက ဒျေါခငျကွီး ဖငျထဲ ဟိုဘကျကလိ ဒီဘကျကလိနဲ့… ဒျေါခငျကွညျ..အရသာထူးကို ခံစားနရေလသေညျ.. .။ မှနျမှနျနငျအမပေျေါတကျပွီးဖငျကုနျးထားစမျး….။ ဟုတျ….။ မှနျမှနျသူအမပေျေါတကျပွီး ဘဘေကျကုနျးလိုကျသညျ..သားမိနှဈယောကျလုံး ထပျလြှကျ လေးဘကျကုနျးနရေသညျ့အနထေား..။ မှနျမှနျ.. ရှနျဖေ….။ နငျ့စကျပတျကိုအရငျလိုးရမလား..ဖငျကိုအရငျလိုးရမလား..။ လိုးခွငျတာသာလိုးပါ ဖရေယျ….. အာ့ဆို စကျပတျကိုအရငျလိုးမယျနျော.. ဟုတျ.. အား….နာတာ့…အား….အဖေ…နာတယျ အား…သပေါပွီအမရေယျ….သပေါပွီ…… သားမိနှဈယောကျလုံး…..ညညျးသံးလေးတကေစညျးနဲ့ဝါး လို့ညညျးညူရှာနသေညျ…သားမိနှဈ ယောကျတဈယောကျလကျတဈယောကျ စုတျရငျး…..ကာမအရသာ ကိုအပွညျ့အဝခံစားနရေရှာသညျ။
ဒျေါခငျကွညျ.ရဲ့ဖငျတဲ့ကလီးတုကွီးကလညျး တကွီကွီဘအျောမွညျရငျး…ဖငျထဲမှာဟိုဘကျလိမျ ဒီဘကျလိမျ့နဲ့….ဒျေါခငျကွီ အပျေါကသမီးကိုပငျမရှကျနိုငျ…. အား..ကောငျးတယျ.. မှနျမှနျကလညျး… ကောငျးတယျဖေ..မွနျမွနျလိုးသမီးပွီးတော့မယျ လိုးလိုး…အားအမကေောငျးတယျ လိုး…လိုး..ရှီးကောငျးတယျဖေ.. ဖလေဲပွီးတော့မယျအား.သုံးယောကျသားသံပွိုငျပငျ ပီးသှားလသေညျ.။ အခုတော့..မှနျမှနျတို့သားမိနှဈယောကျလုံး..ကိုမြိုးကို မလှနျဆနျနိုငျဘဲ.. ကာမကြေးကြှနျတေ ဖွဈနရှောလသေညျ။ ကိုမြိုးကတော့ တဈနတေ့ဈမြိုးမရိုးရအောငျ..သားမိနှဈယောကျလုံးကို လိုးရငျး ပိတိဖွဈနသေညျ..။ ဒျေါခငျကွညျကတော့..မှနျမှနျနဲ့အတူတူ အလိုးခံရတဲ့နမှေ့ စပွိး အဝတျမဝတျရဟုကိုမြိုက ပွောထားသဖွငျ့ ကိုယျတုံးလုံးနဲ့ပငျ ကုတငျပျေါမှာ လဲနရေရှာသညျ..။ အခြိနျကွာလာတော့ ဒျေါခငျကွညျ..အဝတျဘလာနဲ့နရေသညျ နသေားပငျကွနသေညျ..။
မှနျမှနျ ဒျေါခငျကွညျဆေးတိုကျဖို့ အခနျးထဲဝငျရငျး သူ့အမရေဲ့ဘဝကို စိတျမကောငျးဖွဈနသေညျ။ ဒျေါခငျကွညျကတော့ တဈနနေ့ေ့.သူ့ရှမှေ့ာကိုမြိုးက သူမလိုးဘဲ သူဖငျထဲလီးတုကိုထိုးထညျ့ပေးပွီး.မှနျမှနျ ကိုသာလိုးပေးနတေော့..လီတုနဲ့အာသာမပွေ..။ အခုလဲကွညျ့..သု့အဖုတျထဲလကျနိုကျအာသာဖွရေငျး…. အိပျမောကွနလေသေညျ..။ မှနျမှနျက သူ့အမေ အဖုတျထဲက လကျကိုဖယျပွီး..အမအေ့ဖုတျလေးကို..မရှံမရှာ..လြှာလေးနဲ့.. ယကျပေးနသေညျ..ဒျေါခငျကွညျ ခါးပငျကော့တကျသှားသညျ။ အိပျနရေငျး…အိပျမကျလိုလို ဘာလိုလိုနဲ့ လနျ့နိုငျးရငျး ပေါငျကွားထဲကွညျ့လိုကျတော့… သမီးရယျ..မလုပျပါနဲ့… ပါးစပျကမလုပျပါနဲ့သာပွောတာလကျ မှနျမှနျခေါငျးကိုအတငျးဖိးရငျး…အားရှီးအို..ကောငျးလိုကျတာသမီးရယျ…လြှာကလေးနဲ့အဖုတျလေးထဲထိုးထညျ့ပွီးဝငျလိုကျထှကျလိုကျနဲ့လိုးပေးရငျး…သူအမအေရသာတှနေ့တောကိုကွညျ့ပွီးပီတိဖွဈနသေညျ။
မမေေ ကောငျးလား… အိုဘလို မြားမေးလိုကျတာလဲ သမီးရယျကောငျးတာပေါ့…. အာ့ဆိုသမီးနတေို့ငျး..ယကျပေးမယျနျော။ အား…အစိလိုကိုရပျ…အား..ရှီး…ကောငျးလိုကျတာ…။ပွီးတော့မယျ…ရှီး ရပျ ရပျ…..အား…ကောငျးတယျ ပွီးပွီ.ပွီပွီသမီး.. မှနျမှနျက သူ့အမအေဖုတျရညျတကေိုအကုနျရပျပွီးမြိုခွလိုကျသညျ။ အောငျမယျ ဒီသားအမိဟုတျလိုကျခညျြလား…..။ ဖေ ဘယျတုနျးထဲက ပွနျရောကျနတောလဲ… ဘယျအခြိနျရောကျရောကျပေါ့….။ဟုတျပီ အကွံရပီ…. မှနျမှနျအဝတျတခြှေတျ.. ဟုတျ။ ပွီးရငျနငျအမေ မကျြနာပျေါတကျခှပွီး လေးဘကျကုံးထား…ဟိုကောငျမ နငျကနငျ့သမီး စောကျပတျကိုလြှကျပေးလိုကျ…။ ဖရေယျအဲ့လို မလုပျခိုငျးပါနဲ့ သမီးငရကွီးမှာပေါ့..သမီးကိုကွိုကျသလောကျလိုးပါ..မကေိုတော့ သမီးစကျပတျတော့မရပျခိုငျးပါနဲ့။ ဘာလဲနှဈယောကျစလုံးနာခွငျလို့လား…..။ ဦးမြိုးရေ ဦးမြိုးရေ…. ဟဘေသူလဲကှ…. ကြှနျတျော ”အရှိုငျး”ပါ..။ အေးတူရီးလာတာနဲ့ အတျောဘဲလာအခနျးထဲဝကျခဲ့….။
နငျတို့သားအမိ ဒီနတေ့ော့လီးအရသာကို ကောငျးကောငျးကွီး..ခံဖို့သာပွငျထား….။ ဟာဦး ကောငျးလိုကျရီလား..ကြှနျတျောလဲ ရှယျရာဝငျမယျလေ ။ မှနျမှနျ နငျ့အမမေ့ကျြနှာပျေါတကျခှလို့ ပွောနတောမကွားဘူးလား…. ဟုတျ…။ မှနျမှနျသူအမမေကျြနှာပျေါတကျခှပွီး လေးဘကျကုနျးထားလိုကျသညျ..။ ဟိုကောငျမ…နငျ့သမီး စကျပတျကိုရပျပေးလိုကျစမျး အိုး…မေ…ရှီး…ကြှတျ ကြှတျ…။ မှနျမှနျ ဒီမှာကွညျ့စမျး..ငါ့လီးကို…အရှိုငျးက ဂျေါလီထညျ့ပွီး.ပါဝါတငျထားတဲ့သူရဲ့ လီးကွီးကိုထုပျပွလိုကျသညျ…။ လီးတဈခြောငျးလုံး အဖုအထဈနဲ့…အလှနျပငျကွီးမှလှတဲ့ အရှိုငျး လီးကိုကွညျ့ပွီး..မှနျမှနျ မကျြလုံး ပွူးသှားသညျ..။ အရှိုငျး မငျးငါ့မိနျးမလိုးမှာလား..မှနျမှနျကိုလိုးမှာလား….. မှနျမှနျကိုအရငျလိုးမယျ. သားကမှနျမှနျကိုလိုပေး…အနျတီက မှနျမှနျစကျပတျကိုသခွောလကျြပေး…ဦးက နောကျကနေ…အနျတီကိုလိုးပေါ့ မကောငျး…ဘူးလား….အေးမဆိုးဘူးကှဒီအကွံ…။
အရှိုငျးကမှနျမှနျအပျေါတကျခှပွီး…လိုးရငျအသငျ့…ကိုမြိုးကလညျး….ဒျေါခငျကွညျစကျပတျဝမှာလီးကိုတပွေိ့း လိုးရနျအသငျပငျ။ မှနျမှနျ သခွောကိုငျထားနျော..နဲနဲနာမယျ..အနျတီကသေးခွာရပျပေး အဲ့တာမှနာကွငျမှုပွောကျမှာ….။ ထညျပွီနျောမှနျမှနျ…။ အရှိုငျးစတငျလီးကို..မှနျမှနျဖငျထဲ ထဈမွုတျယုံမွ သှငျးလိုကျသညျ… အိုး..အား…သေးပါပွီ…အမရေယျ….ကှဲပွီ… မှနျမှနျဖကျက သှေးတထှေကျကွလာသညျ…ဒျေါခငျကွညျကလညျး သူ့သမီးနာကွငျမှုဝဒေနာ..ပွောကျအောငျ အစှမျးကုနျလြှပျပေးနရှောသညျ..အောကျကလညျးကိုမြိုးကလညျး စတကျလိုးနပွေီ….။ အား…အမသေပွေီ….အား..ကှဲပွီ.. မှနျမှနျ စံခြိနျတငျလီးကွီးရဲ့ဒဏျကိုမခံနိုငျပါ. သို့ပမေဲ့လို့…သူ့အမအေလြှပျကောငျးမှူကွောငျ့. ရမကျသှေးတှေ ထကွှပွီး..ဖငျကနာ..စကျပတျကအရသာကောငျးနှငျ့..တဈအားအားနဲ့သာ..။ဒျေါခငျကွညျကလဲလီနဲ့ဝေးနတောကွာပွီ မို့ ကိုမြိုးလိုးနတောကို ဖီလျး တကျ…။
အားနာတယျ…မမေေ သမီးစကျပတျကို မလြှပျဘဲဘာလုပျနတောလဲ…သမီး သတေော့မယျ. အား…သပေါပွီအမရေယျ…။ အေးအေး အမလေဲအလိုးခံနရေလို့ပါ…မရဘူလြှကျ…မွနျမွနျလြှပျမှနျမှနျကတဈအားအားနဲ့သာအျောနတော..အရှိုငျးလီးကတဈဝကျပငျဝငျနသေေးသညျ့..အနောကျမှာချေါလီကွီးနတေယျစှံကားနတေော့လီးက အဆုံးမဝငျသေး။ ဖဖေေ မမေကေိုနာနာလို သမီးကို မလြှပျပေးဘူး…။ ဖွောငျး…ဟဲ့ကောငျမ လြှပျပေးလိုကျစမျးနငျ့သမီးကိူ မလြှပျရကျပိုနာမယျ….။ ကာမ ဘဝထဲမှာမှနျမှနျသူ့အမကေို့လဲ အမမှေနျးမသိတော့…သူ့ကောငျးကောငျး ခံစားဖို့သာ စိတျထဲမှာရှိသညျ။ ဦးမြိုး ကြှနျတျော အိတျထဲမှာလီးအတုအသဈထှကျလို့ဝယျလာတာပါတယျ အဲ့ မှနျမှနျအဖုတျထဲ ခလုပျဖှငျ့ပွီးထိုးထညျ့ပေး…. အိုလီးတုကလဲ အကွီးကွီးပါလား ကိုမြိူးမှနျမှနျ စကျပတျ ထဲလီးတုကွီးကိုထိုးထညျ့လိုကျသညျ။ ဟဲ့ကောငျမ နငျသမီးစကျပတျကိုလီးတုကိုငျပွီး လိုးပေး..။
ပါးစပျကလညျးသခွောယကျအို…ကြှတျ…မှနျမှနျဖငျကလီးတဈခြောငျး..စကျပတျမှာလီးကတဈခြောငျး…အမကေစကျပတျလြှပျပနေဲ့…..နာကောငျးကွီးဖွဈနသေညျ…။ အားအမေ မွနျမွနျလြှပျကောငျးတယျ…လြှပျ….ရှီး..။ အရှိုငျး မှနျမှနျခါးကိုကိုငျပွီး…လီးကိုတဈဆုံးထိုးထညျ့လိုကျသညျ… အိုး…သပေါပွီ….အား…အမေ…သမီး ဖငျကှဲပွီ ဘှတျ…ဘှတျ… အားမလေး..သပေါပွီ…ကှဲပွီ… ဘလို လဲ ကောငျးလား ငါလိုးတာကောငျး လားမှနျမှနျ မှနျမှနျပွနျမဖွနေိုငျ.. ဖွောငျး..ဟဲ့ဖွစေမျး.. ကောငျးတယျ…ကောငျးပါတယျရှငျ… အေးအဲ့တာဆို ညိမျခံနဟေုတျပွီလား..။ အခကျြသုံးဆယျလောကျ…လိုးရငျး..အရှိုငျးလိုးခကျြတကေ ပိုမိုမွနျဆနျလာသလိုမှနျမှနျလဲနာကွငျမှုအနညျးငယျ ပွောကျလာပွီး ကာမအရသာထူးတှနေ့ပွေီ….ကိုမြိုကလညျး…ထနျလာပွိ မှနျမှနျအမလေဲတျောတျော ကောငျးနပွေီ။ အား..ကောငျးတယျ..လိုး…လိုး…..အရှိုငျး လိုးလိုး…..မွနျမွနျလိုး….ကိုမြိုးရေ.. ကောငျးလာပွီ အသကုနျလိုးတော့..။
အားးး ရှီး…အားပီးပီ..ပီးပီး…။ လေးယောကျသားကုတငျပျေါမှာ အမောဖွရေငျး…မှနျမှနျက အရှိုငျးရငျခှငျဝငျ..ဒျေါခငျကွညျကလဲ ကိုမြိုးရငျခှငျထဲမှာတဈယောကျမကျြနှာ တဈယောကျကွညျ့ရငျး..ပတိတဝေဖွောရငျး… ပြျောရှငျစရာမိသားစု ဘဝလေး..မှာ…မနကျဝလေီဝလေငျး…နတေ့ဈသဈရဲ့….အလငျးရောငျနဲ့အတူ… ပြျောရှငျ ပွုံးပြျောနကွေလသေညျ…။ အရှိုငျး လှကိုခဈြလား ဟငျ….။ခဈြတာပေါ့….။ အဲ့တာဆို လှ ကိုလိုး ရငျ မညှာမတာဘာလို့လိုးတာလဲ။… အာ့မှ ဖီး ပိုရှိလို့…ဘာလဲ လှက ခံရတာမကောငျးဘူးလား…မကောငျးရငျ လီးကို ဂျေါလီထပျထညျ့ ပွီး.. ပါဝါထပျတငျလိုကျမယျလေ…။ ဟိုဆရာ..ဟိုးကောငျးတယျ…အရမျးကောငျးတယျ မှနျမှနျ စကားအဆုံးမှာ ကိုမြိုးနဲ့ ဒျေါခငျကွညျပါတဟားဟားနဲ့ ပွုံးပြျောရငျး…. ပွီးပါပွီ။
မွန်မွန်တစ်ယောက် မိခင်ဖြစ်သူကစူလိုက်သဖြင့် စူပုတ်ပြီး အိမ်ပြင်ထွက်လာသည်။ အသက် ၁၈နှစ် အရွယ် မွန်မွန်ဟာ နမည်နဲ့လိုက်အောင် ဥစ္စာပေါရုပ်ချော လှမ်းလျှောက်တိုင်း ဘယ်ညာယိမ်းနေတဲ့ တင်ကြီးနှစ်လုံးနဲ့ နိုးနှစ်လုံးဟာ အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင် ဖွံဖြိုးလှသည်။ သမီးဘယ်သွားမလို့လဲ မျက်နာကစူပုတ်နေတာဘဲ ဘာလဲ သမီးအမေဆူလိုက်လို့လား… လာလာအဖေနဲ့ပြန်လိုက်ခဲ့…. အဖေဆိုလို့ အဖေရင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး မွန်မွန် ၁နှစ်ခွဲအရွယ်မှာ မွန်မွန်အဖေဟာ ယာဉ်တိုက်မှုဖြင့် ဆုံးသွားပြီးနှစ်လအကြာမှမိခင်ဖြစ်သူဟာ ကိုမျိုး ဆိုတဲ့လူနဲ့ပေါင်းသင်းခဲ့တာပါ.အသက်၃၀ အရွယ်သာရှိသေးတဲ့ ကိုမျိုးဟာ အရပ်ရှည်ရှည်ထောင်ထောင်မောင်းမောင်နှင့် အလွန်စိတ်ကြီးတက်သူပါ..မွန်မွန်က လည်း ငယ်ငယ်ထဲက ပထွေးလက်ပေါ်မှာကြီးလာတာဆိုတော့ပထွေးကိုဘဲ အမေထက်ပင်ချစ်ကြောက်ရိုသေ နေရသည်။ အခုလဲကြည့် ပထွေးရင်ခွင်ထဲဝင်ပြီး ဖက်ထားရှာလေသည်။
လာပါသမီးရယ် ဘာမှမကြောက်နဲ့ ဖေဖေတစ်ယောက်လုံးရှိပါတယ်။လာအိမ်ပြန်မယ် ဆိုပြီ… ပထွေးလက် ကိုဆွဲပြီး အိမ်ပြန် လိုက်သွားသည့်… ။ ကိုမျိုးနဲ့ မွန်မွန်အိမ်ပြန်ရောက်သည်နှင့် မွန်မွန်အမေဟာ အဝတ်စားထုတ်ကိုစွဲပြီး…ကိုရေ…နယ်ကအဒေါ်အသဲအသန်ဖြစ်လို့အာ့တာမေ လိုက်သွားလိုက်အုံးမယ်…. အေးအေး,။ မွန်မွန်ကတော့ ရင်ထဲကပင်အဒေါ်ဖြစ်သူကိုကြိတ်၍ကျေးဇူးတင်နေသည် ဖေ. သမီးအပေါက်ထပ်တက်တော့မယ် အေးအေး သမီး…. ။ ပထွေဖြစ်သူ ကိုမျိုးလဲ အပေါ်ထပ်တက်သွားတဲ့မယာပါသမီးမွန်မွန်ရဲ့ ဟန်ချက်ညီစွာ ဘယ်ညာရိမ်းနေတဲ့ တင်သားတေကိုကြည့်ရင်း… . မွန်မွန်.မွန်မွန် တစ်နေ့တစ်ခြားပိုပိုပြီးတော့တောင် ဖင်တေရင်တေလှလာပါလား ကိုမျိုး မွန်မွန်ရဲ့ ဖင်တေကိုကြည့်ရင်းအခန်းသို့ဝင်ပြီး ဂွင်ထုနေလိုက်သည်။ အလုပ်ကမောမောနဲ့ပြန်လာပြီး ဂွင်ထု လိုက်ဖြင် ဂွင်းထုးရင်နဲ့ပင်ကုတက်ပေည်အိပ်မောကြလေနေပြီ။
ည ခြောက် နာရီထိုးတာနဲ့ မွန်မွန် လဲထမင်းဝိုင်းပြင်ပြီးပထွေးဖြစ်သူ ကိုမျိုးကိုနိုးရန်အခန်းထဲသို့ ဝင်လိုက်သည်နှင်. လီးကိုတစ်ခါမှမမြင်ဘူးသေးသော အပျိုရိုင်းလေး မွန်မွန် တစ်ယောက်အသက်ရူသန်တေမြန်လာပြီး တစ်ခါမှမခန်းစားဖူးသေးသောခံစားမှုမျိုးကို ခံစားမိပြီးအဖုတ်ကိုလက်နဲ့ပွတ်ရင်း ဖီး တေတက်နေတာ ပထွေးဖြစ်သူနိူးနေတာကိုပင် သတိမထားမိ.. မွန်မွန်… ဟဲ့မွန်မွန် ပထွေးဖြစ်သူကိုမျိုးလဲရလာ တဲ့အခွင့်ရေးကို လပ်လွတ်မခံဘဲ စိတ်တျုနေသောအနေထားဖြင့် မယာပါသမီးမွန်မွန်ကို ခေါ်လိုက်သည် မွန်မွန် လည်းလန့်၍ ပြန်ပင်မထူးရဲ ..။ ဟဲ့ငါခေါ်နေတာမကြားဘူးလား…. ဟုတ်ဟုတ် ကြားပါတယ်ဖေဖေ… ညည်းငါ့အခန်းထဲဝင်ပြီး ဘာလုပ်နေတာလဲ. ဘာမှမလုပ်ပါဘူး…သမီးဟိုလေ..ဟိုဟာ .. ဟိုတေဒီတေလုပ်မနေနဲ့ နင်လုပ်နေတာငါအကုန်လုံးမြင်တယ်နင်ငါ့လီးကိုကြည့်ပြီး နင့်အဖုတ်ကိုလက်နဲ့ပွတ်နေတာမမြင်ဘူးထင်နေလား….။
မဟုတ်ပါဘူး ဖေရယ်. .. ဘာမှငါ့ကိုလာမလိမ်နဲ့ ညည်းလိမ်ရင်ပိုဆိုးမယ်နော် မှန်မှန်ဖြေစမ်း…ဟုတ်ပါတယ်…ဘာဟုတ်ပါတယ်လဲ ပြည်ပြည့်စုံစုံဖြေ…. သမီး အဖေ့ ဟိုဟာ ဟိုဟာ..ကို ဟိုဟာဒေ ဒီဟာဒေ လာပြန်ပြီလား ငါစိတ်တိုလာပြီနော် ဟုတ် ဟုတ်သမီးအဖေ့လီးကိုကြည့်မိပါတယ်… အေး ညည်းအပြစ်ကိုညည်းသိတယ်နော်… ဟုတ် သိပါတယ်ဖေ….. သွားမြန်မြန် ခြံအပြင်မှာတုတ်သွားကောက်ခဲ့ရီ…ဟုတ်..ဟုတ် မွန်မွန် လဲကြောက်ကြောက်ဖြင့် ခြံပြင်ကိုပြေထွက်ခဲ့သည်.. မယားပါသမီး မွန်မွန်ပြေးသွားပုံကိုကြည့်ရင်း ကိုမျိုတစ်ယောက် ပိတိတေဖြင့်ကြည့်နေလေသည် (စွဲရတော့မယ်) ခြံပြင်မှဝါးခြမ်းပြားတွေ့သဖြင် မွန်မွန်တစ်ယောက်တုံ့ဆိုင်းမနေဘဲ အိမ်ထဲသို့အမြန်ဝင်ပြီး ပထွေးဖြစ်သူလက်ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်သည်။ မွန်မွန် ရှေ့ကိုတိုးခဲ့စမ်း အကြောက်လွန်နေသဖြင့် မွန်မွန် ရှေ့ပင်မတိုးရဲ ကိုမျိးလဲဒေါသထွက်ပြီး..ဖြန်း..ဖြန်း..ဆိုနှစ်ချက်ရိုက်ခြလိုက်သည်..။
မွန်မွန်လဲနာလွန်း သဖြင့်ငို့လည်းငိုရှေ့မတိုးရင် ထပ်ပြီးရိုက်ခံရမှာစိုးသဖြင့် ရှေ့ကိုတိုးခဲ့သည် လက်မြောက်ပြီး ဟိုဘက်လည့် မွန်မွန်တစ်ရောက် ပထွေးဖြစ်သူကိုကြောက်လှသဖြင့် လက်ကိုမြောက်ပြီး ပထွေးနဲ့ ဘေးဇောင်းအနေထားသို့လည့်လိုက်သည်။ပထွေးဖြစ်သူကိုလှမျိုးက မွန်မွန်ရဲ့ စကတ်ကို စွဲမလိုက်သည်နှင် မွန်မွန်လည်း လက်ကိုအောက်ပြန်ခြပြီး စကတ်ကိုအောက်သို့ပြန်ဆွဲချလိုက်သည်။ နင့်ကိုလက်မြောက်ထားလို့ပြောနေတာနင် နားမလည်ဘူးလား ဖြန်း ဖြန်း ဖြန်း…. သုံးလေးချက်ရိုက်လိုတာ မွန်မွန်လည်း မတ်တပ်ပက်မရပ်နိုင် ခွေလျပ်ကြသွားသည်။ ဟဲ့ မျက်ရေကိုအခုသုတ်. ပြန်ပြီးမတ်တပ်ရပ်စမ်း…ဟုတ် ဟုတ်…ညည်းကအတက်ကောင်းတေတပ်နေတာ ဆိုတော့ငါကဆုံမပေးရမှာပေါ့..နင့်ကိုဖင်လှန်ပြီးရိုက်မလို့ စကတ်တေက ရှုပ်တယ် စကတ်ကိုချွတ်ပြီးလက်မြောက်ထား….. မွန်မွန်တစ်ယောက်ဘာလုပ်လို့ဘာကိုင်ရမှန်းမသိ….အိမ်နေရင်ဖြစ်သဖြင့် ပင်တီနဲ့ ဘရာ မဝတ်ထား။
တကယ်လို့စကတ်ချွတ်လိုက်ရင်မိမွေးတိုင်းဖမွေးတိုင်းကိုတုံးလုံးဖြစ်တော့မည်…မချွတ်ပြန်ရက်လည်း ပိုပြီးအရိုက်ခံရတော့မည်။ ဟဲ့ ငါပြောနေတာမကြားဘူးလား. သမီးမှာ ဟိုဟာ… လာပြန်ပြီလားဟိုဟာ. ချွတ်ဆိုချွတ်..မချွတ်လို့ကတော့ငါ့အကြောင်းကောင်းကောင်းသိမယ်.။ မွန်မွန်လည်း ရှပ်ရှပ်နဲ့ပင် စကတ်ကို ချွတ်ချလိုက်သည်…လက်မြောက်ပြီး ငါ့ဘက်လှည့်စမ်း.. မွန်မွန်ရှက်ရှက်နဲ့ပင်မျက်စိမှိတ်ပြီးကိုမျိုးဘက်လှည့်လိုက်သည့်… လှလိုက်တဲ့အဖုတ်….ကိုမျိုးလည်းဘေးကခုန်ကိုမွန်မွန်ရှေ့မှာယူထိုင်ပြီးမွန်မွန်ရဲ့အဖုတ်လေးကို ပွတ်ကြည့်လိုက်သည်… မွန်မွန်လဲတစ်ခါမှအကိုင်မခံဘူးသဖြင့် ကိုမျိုးလက်ကို လန့်ပြီးဖယ်လိုက်မိသည်။ ကိုမျိုးလဲဒေါသထွက်ပြီး လက်ကိုသုံးချက်ရိုက်လိုက်သည်။ဖြန်း…ဖြန်း…ဖြန်း နောက်ဆို ပြန်ချအုံးမလား ပြန်ချအုံးမလား….. မချ တော့ပါဘူးဖေရယ်. လာငါ့နောက်လိုက်ခဲ့ဆိုပြ်ီး ကိုမျိုးမနက်တိုင်း ဘားခိုနေတဲ့ ဘားတန်းမှာလက်ကို ပဝါပါးနဲ့ပတ်ပြီး ကြိုးတုတ်ထားလိုက်သည်။
မွန်မွန်မတော့အငိုနဲ့ပင် ပထွေးဖြစ်သူကိုမျိုးလဲ နောက်တစ်ကြိမ်ခုန်ပြန်ယူပြီး မွန်မွန်ရှေ့မှာထိုင်လိုက်ပြန်သည်။ ခုနကငါလီးကိုကြည့်ပြီးပွတ်နေတာ ဒီအဖုတ် ဟလား..ပွတ်ပေးရမှာပေါ့ဆိုပြီး.. မွန်မွန်အဖုတ်လေးကိုအပေါ်အောက်ပွတ်ဆွဲနေလိုက်သည်။ မွန်မွန်တစ်ယောက် ဖီး တေတက်ပြီး ငိုသံတိတ်၍ညည်းသံလေးများပေါ်လာသည် ဟင်း…..အင်း….အင်း……. တော်တော်ကြာပွတ်ပေးပြီး အဖုတ်ထဲလက်ခလယ်ထိုးထည့်ကြည့်လိုက်သည်။ အမေ…..အား နာတယ်….. အဖေနားတယ် ဖြေးဖြေး… ကိုမျိုးတစ်ယောက် မွန်မွန်ပြောစကားကို နားမျှမဝင် လက်ခလယ်ကို ထိုးမြဲတိုင်းထိုးထည့်နေသည်… မွန်မွန်မှာ နာလည်းနာကောင်းလဲကောင်း နဲ့ ညည်းညူ၍သာနေလေသည်.. အင်း….အား……. အား…….. ကောင်းတယ်ဖေ သမီးမနေနိုင်ဘူး သွက်သွက်လေးလုပ်ပေးပါ အား…ကောင်းတယ် ထည့်ပါဖေ…အား… မွန်မွန်တစ်ယောက် တစ်ချီပြီးသွားလေသည်.။
ကိုမျိုးလည်း မွန်မွန်ဖြစ်ပုံကိုကြည့်ရင်း ပြုံးစိစိဖြင့် မွန်မွန်ကို ကြိုဖြေပေးလိုက်သည်…ကြိုဖြေပေးလိုက်သည်နှင့် ပျော့ခွေ၍ လှဲခြလိုက်သည်။ ကိုမျိုးကတော့ အခန်းထဲဝင်ပြီး ကုတင်ပေါ ပတ်လပ်အနေထားဖြင့် မွန်မွန် ကို….. မွန်မွန် ဒီကိုလာခဲ့စမ်း….. ထဖို့ရန်အားမရှိသော်လဲ အရိုက်ခံရမှာကြောက်သောကြောင့် မွန်မွန် အားယူ၍အခန်းပြန်ဝင်ခဲ့သည် လာကုတင်ပေါ်တက်ပြီ ငါ့လီးစုတ်ပေးစမ်း…. ရှန်….. မွန်မွန်လန်သွားလေသည်..နဂိုထဲက အသန့်ကြိုက်သူမို့ မွန်မွန်တစ်ယောက် သု့ ပထွေးရဲ့ လီးကိုစုပ်ဖို့မပြောနဲ့ အနံပင် မခံနိုင်….လီးကိုကြည့်ပြီးရင်ထဲမှာ ပျိုတက်သလိုခံစားနေမိသည်။ ငါလီးစုပ်ပေးလို့ပြောနေတာမကြားဘူးလား..ထပ်အရိုက်ခံခြင်နေတာလား… မွန်မွန်မှာရွေးခြယ်ဖို့လမ်းမရှိ အရှိက်ခံတာထက်စာရင် လီးစုပ်ပေးကတာတော်သေး ဟုတွေးပြီး ကုတင်ပေါ်သိုတက်ပြီ ထိုင်နေလိုက်သည် လီးကိုစုပ်မယ်သာပြောတာရင် ထဲမှာအခုထိ မသဒီ။ ဟဲ့လုပ်လေ မြန် မြန် ငါလီးကို သေခြာကိုင်ပြီးစုပ်…။
သေခြာမစုပ်လို့ကတော့ နာမယ်သာမှတ်…. မွန်မွန် တစ်ယောက် ပထွေးရဲ့ လီးကိုကိုင်ပြီး ပါးစပ်ဝတင်တေ့၍သာထားသည် ကိုမျိုးရဲ့လီးဟာ အရှည် ၆ လက်မ လုံးပတ် ၃လက်မခွဲလောက်ရှိသည့် လရဲ့ထိပ်မှာ လရည် တေ ကပ်နေသဖြင် မွန်မွန်အဖို့ စုပ်ရန်အဆင်မပြေ ပြို့ပြို့၍သာနေသည်။ ကိုမျိုးက အသံမာကြီးဖြင့်… ပါးစပ်ထဲထည့်မှာဖြင့်မထည့်ဘဲဘာလုပ်နေတာလဲ…အဲ့တော့မှမွန်မွန်လည်း လီးကိုရွံရှာ သောလည်း ကြောက်ကြောက်ဖြင်ပင် ပါးစပ်ထဲထည့်လိုက်သည် စိတ်ထဲမှာ ပျိုအန်ခြင်သော်လဲ စိတ်ကို မနဲထိန်းပြီး သက်၍စုပ်ပေးနေသည်။ ကိုမျိုးကတော့ အရသာထူးတွေ့ပြီးမိန်းနေလေသည်… စုပ် စုပ် အားရပါးရစုပ် …အား…..စုပ်စမ်းပါ….အားရပါးရစုပ်….။ ကိုမျိုးကာမစိတ်အထွတ်အထပ်သို့ ရောက်နေလေပြီ…… အားသမီး ကောင်းတယ် စုပ်..စုပ်…စုပ်… အားရပါးရစုပ်စမ်း….. ကိုမျိုးပြီးခြင်လာပြီ…….မွန်မွန်ရဲ့ခေါင်းကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင်ကိုင်ပြီး သုံးလေးချက်စောင့်လိုးလိုက်တာ။
ကိုမျိုး မွန်မွန် ပါးစပ်ထဲမှာပင် လရည်များပန်းထည့်လိုက်ပြီး ခေါင်းကိုဖိထားလိုက်သည်။ မွန်မွန်မှာ ထွေးထုတ်ဖို့ လီးကပါးစပ်ထဲမှာတန်းလန်း…. ကိုမျိုးက နှာခေါင်းပိတ်ပြီး လရည်ကို မျိုချခိုင်းလိုက်သည်……မွန်မွန်လဲ ပထွေးဖြစ်သူကိုမလွန်ဆန်ရဲသဖြင့် မမျိုခြင်သော်လည်းမျိုခြလိုက်ရသည်။ လီးကို မွန်မွန်ပါးစပ်ထဲစိမ်ထားပြီးမှ မွန်မွန်ကို ကုတင်ပေါ်မှာ ပလတ်လန်ခိုင်းလိုက်သည်…. မွန်မွန်လဲ ပထွေးဖြစ်သူကိုမလွန်ဆန်ရဲသဖြစ် ပထွေးဖြစ်သူပြောသလိုင်နေပေးလိုက်သည်။မွန်မွန်အပေါ်မှ ပထွေးဖြစ်သူကိုမျိုး ကတက်ခွပြီး အဖုတ်ထဲကို စတွေး ထွေးထည့်လိုက်သည့်။ မွန်မွန်မှာတော့ လီဖြင့်မဆိုထားနှင့် လက်သန်းမျှပင် မထိုးထည့်ဖူးသေးသောမိမိဘစောက်ပတ်ကို ကိုအဖေရွယ် ပထွေးက လီးကြီးကြီးဖြင့် လို့တော့မည်ကိုရင်ထဲမှာ တစ်ဒိန်းဒိန်းခုန်ရင်း မျက်စိကိုမိတ်ပြီး ခေါင်းအုံးကို လက်နဲ့ ကြစ်ကြစ်ပါအောင် စုပ်ထားလိုက်ပြီး ဖို့ရန်အသင်စောင့်ဆောင်နေလိုက်ပြီ… ။
ဒီအခြေနေကို ဘေးမှာခြောင်းကြည့်နေသူ ကိုမျိုးရဲ့တူခြောင်းကြည့်နေသည်ကို နှစ်ဦးစလုံးသတိမထားမိ. ကိုမျိုးကတော့…. လီးကို မွန်မွန်ရဲ့ အဖုတ်မှာတေ့ရင်း အပေါ်ဆွဲအောက်ဆွဲလုပ်နေသည်…မွန်မွန်လည်း ဖီး တေတက်ပြီး ညည်သံလေးသဲ့သဲ့ ထွက်လာသည်… အင်း……အင်င်းး…….ဟင်း…..ဟင်း….. .အဖေ သမီးမနေနိုင်တော့ဘူး လိုးမယ်ဆိုလဲလိုးပါတော. သမီးမနေနိုင်တော့ဘူး…..ဟင်း သမီးဖြစ်သူအချက်ပေးလိုက်သည်နှင့်ကို မျိုးလဲ လီးကိုအဖုတ်ထဲ ထိုးထည့်လိုက် သတ္တဝါနဲ့ လက်နက်နဲ့မမျှသဖြင့်။ လီးကမဝင် ကိုမျိုးလဲ အားစိုက်ပြီး ဖိထိုးခြလိုက်ရာ…. အား….အမေ…….သေပါပီ……သမီးစက်ပတ်တော့ ကွဲပါပြီ…အား…နာတယ်…. သမီးတောင်းပန်ပါတယ် ဖေဖေရယ်.. သမီးနောက်တစ်ခါဖေဖေလီးကိုမကြည့်တော့ပါဘူး…ဟီးးဟီးး ဖေဖေလီးကိုစုပ်ဆိုလဲ စုပ်ပေးပါ့မယ် အခုတော့တော်ပါတော့….. သမီးစက်ပတ်တော့ကွဲပါပြီ…… ကိုမျိုးကတော့သမီးဖြစ်သူရဲ့စကားကိုဂရုပင်မစိုက်။
ဒစ်တစ်ဝက်ကျော်ကျော်မျှသာဝင်သေးသောလီးလို အားနဲ့ဖိ၍ထိုးထည့်လိုက်သည်…… အား……အားမလေးသေပါပြီ.အဖေရဲ့… သေပါပြီ.. အား…အား…….အမေရေကယ်ပါအုံးအမေရယ်…. သမီးစပ်ပတ်တော့ ကွဲပါပြီ အပျိုရိုင်းလေးဘဝကြင့်သားမရှိဘဲ လီးကြီးကြီးဖြင်အလိုးခံရသဖြင့် သွေးစများပင်ထွက်နေလေပြီ. ဆယ်ချက်လောက်ဖြေးဖြေးလေး ခုတ်လိုက်သွင်းလိုက်လုပ်နေသော်လည်း အပျိုမြှေးမှာမပေါက်သေးပါ မွန်မွန် နာကြင်မှုနှင်အတူ ခံစားမှုတစ်မျိုး နာကောင်းကြီးကိုခံစားနေရပြီ…အဲ့အချိန်မှာဘဲ… ကိုမျိုဟာ လီးတစ်ဝက်မျှသာ အထုတ်အသွင်းလုပ်ရာကနေ မွန်မွန်ခါးကိုညစ်ပြီး အားကိုထည့်၍ဖိထိုးခြလိုက်သည်…… အား……ကွဲပါပြီ……သမီးစက်ပတ်တော့ကွဲပါပြီ….အားနာတယ် အဖေရယ် ဖြေဖြေလိုးပါ…. သမီးကိုသနားပါအုံးအဖေရယ်…အားသေပါပြီ….. မွန်မွန်တစ်ယောက်အော်ရင်းနဲ့ပင် ကာမအထွ၌အထပ် ရောက်လာပြီ။
လိုး….. လိုးစမ်းပါ…..အဖေ ရယ်…..သမီးစက်ပတ်ကွဲရင် ကွဲပါစေ….လိုးစမ်းပါ….အား….ပြီးတော့မယ် ဖေ….အား ကိုမျိုးနဲ့ မွန်မွန် နှစ်ဦးစလုံးပြိုင်တူပြီးလိုက်သည်။ ကိုမျိုးနှင် မွန်မွန် အပြင်းအထန်လိုးပွဲကြည့်ရင်း ဘေးမှခြောင်းကြည့်နေသူ အရှိုင်းလဲ စိတ်တေထန်ပြီး မတ်တပ်ရပ်လျက်ပင် ဂွင်ထုရင် အခန်းဝမှာပင်…. ပြီးသွားလေသည်။ ဝုန်း……အခန်အဝမှ ထောင်ထားသော အမိုက်ကို အရှိုင်း ရုတ်တရက်ဝင်တိုက်မိလိုက်သည်။ ကိုမျိုးနဲ့ မွန်မွန်လည်းအသံကြားရာဘက်သို့.. လှည့်ကြည့်လိုက်ရာ.ဟင်။ အရှိုင်း… အရှိုင်း……။ မွန်မွန်ရင်ထဲမှာ နာကြင်မှုထက် မိမိချစ်သူအရှိုင်း ရှေ့မှာသူဦးလေးကိုမျိုး ပတ်ပတ်ဆက်ဆက် လိုးတာ ခံနေရ သည်မို့ မျက်ရည်များပင်စီးကြနေသည်.. အရှိုင်းတောင်းဆိုခဲ့စဉ်အခါက ခါးခါးသီးသီးငြင်းခဲ့ သော်လည်း အခု အရှိုင်းရှေ့မှာတင်ပထွေးဖြစ်သူနဲ့ ပတ်ပတ်ဆက်ဆက် လိုးပွဲဝင်နေခြင်းကို ရှက်လည်း ရှက်…၍ စကားပင် ပြန်မပြောနိုင်။
အရှိုင်းလဲခြောင်းကြည့်ခဲ့စဉ်က မိမိချစ်သူမှန် မသိခဲ့.. အခုတော့…မိမိဦးလေးလိုနေသောမိန်းကလေးဟာသူချစ်သူကောင်မလေးမှန်းသိလိုက်ရသဖြင့်… မျက်ရည်များပင် စီးကြနေပြီး…အခန်ရှေ့မှာပင်…သူချစ်သူဖြစ်အင်ကို ကြည့်ပြီးယူကြုံးမရ ဖြစ်နေလေသည်။ ဒီ အခြေနေကိုရိပ်မိလိုက်သောကိုမျိုးကအတွေးထဲတစ်ခု စဉ်းစားလိုက်ပြီး…..။ ဟောင့် အရှိုင်းလာလေကွာအထဲဝင်ခဲ့….ဒီကောင်မ $ ချိုးမပြေလို့ ဆုံးမနေတာ..လာ….လာ….အထဲဝင်ခဲ့..။ ဟုတ်.. ဦး.. လာကုတင်ပေါ်တက်…. ဟုတ်ဦး..။ မွန်မွန်ကတော့ အရှိုင်းကို မျက်နာမပြဝံ့၍ ခေါင်းကို မျက်လွဲ၍နေရင်း မျက်ရည်များစီးကြလို့နေလေသည်….. ကိုမျိုးကတော့မွန်မွန်အဖုတ်ထဲစိမ်ထားတဲ့လီးကိုနုတ်ပြီး ဘေကအဝတ်ဆွဲယူပြီး လီတွက်ပေနေသော.. လရည်များကို အဝတ်ဖြက့်သုတ်ရင်း…အမောဖြေနေသည်။ မွန်မွန်နဲ့ အရှိုင်းကတော့ တစ်ယောက်မျက်နာ တစ်ယောက်လွဲရင်း အတွေးကိုစီနဲ့…ပင်။ အရှိုင်း ဒီဘက်လှည့်လေလေကွာ…. မွန်မွန် အရှိုင်းလီးကို စုပ်ပေးလိုက်စမ်း.။
မွန်မွန် တစ်ယောက်အရှိုင်းမှာကို့ချစ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်သော်လည်း အရှိုင်းချစ်တာကို အသာစီးယူပြီး အမြဲတမ်း မာနထားပြီး အနိုင်ယူခဲ့လေသည်။ အခု ကိုအမြဲအသာစီးယူနေသော အရှိုင်း လီးကိုးစုပ်ပေးရမယ်ဆိုတော့ အလွန်ပင်ရှက်နေသေည်..မစုပ်ရင်လည်း ပထွေးရိုက်မှာကိုကြောက်လှသဖြင် ရှက်ရှက်နဲ့ပင် အရှိုင်းလုံခြည်လေးကိုလှန်ပြီး…အရှိုင်းလီးကိုစုပ်ပေးလိုက်သည်။ အရှိုင်း…နာကြည်းမုန်းတီးမှုနဲ့..ဘာမှပင်ပြန်မပြောမျက်နှာထားတင်း၍သာထားလေသည်။ ဘလို့ဘဲမျက်နထားတင်း၍ထားပါသော်ညားလဲမွန်မွန်ရဲ့ အစုပ်ကောင်းလှတဲ့ အခိုက်တန့် မှာတင် အရှိုင်း တစ်ယော ကာမစိတ်တေ ထကြွလာပြီး…အသံများပြင်ထွက်လာလေပြီး… ကောင်းတယ် စုပ် စုပ် နာနာလေးစုပ် ပြီးတော့စုပ်…… အသံများရဲ့ အစုံးမှာ အရှိုင်းတစ်ယောက် မွန်မွန်ပါးစပ်ထဲမှာတင် လရည်များပန်းထည့်လိုက်သည်…မွန်မွန်လဲ လရည်များကိုတစ်စက်မကျန်ပင် သောက်ချလိုက်လေသည်……..။
မွန်မွန် ဖင်ကုန်းစမ်း…. ကိုမျိုးရဲ့ စကားသံကြောင့် မွန်မွန်တစ်ယောက် အရှိုင်းလီးကို စုပ်နေရာကပင် ဖင်ကုန်းလိုက်ပါသည်။ ဟောင့် အဲ့ကောင်မကို နာနာ ဆုံးမလိုက်စမ်း….။ မွန်မွန်ငါ့လီးစုပ်ပေးစမ်း… မွန်မွန်လည်းဖင်ကုန်းနေရာကပင် ကိုမျိုးဘပ်လှည့်ပြီး ကိုမျိုးလီးကိုးစုပ်ပေးနေချိန်မှာဘဲ အရှိုင်း က မွန်မွန်ရဲ့ အဖုတ်ထဲ သူ့လီးကိုစောင့်လိုးလိုက်သည်…… မွန်မွန်ပါးစပ်ထဲလီးနှင့်ပြည့်ကြပ်နေ၍အော်လို့ပင်မရ…. အရှိုင်း လိုးချက်တေက ကိုမျိုးလို ညင်ညင်သာသာမလို့ဘဲတစ်ခါထဲ စောင့်ထိုးလိုက်သဖြင့်မွန်မွန်တစိယောက်မချိမလှခံစားနေရပြီလေပြီ….. အု့….အင့်…အင့်……အင်း…… အရှိုင်း ကာမစိတ်တေ အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်လာပြီ…မွန်မွန် ဆပင်ကို ကိုင်ပြီး အသကုန်ဆောင့်လိုးနေလိုက်တာ… မွန်မွန်အဖုတ်ထဲမှ သွေးများပင်ထွက်ကြနေလေပြီ။ အတန်ကြာအောင်ဆောင့်ပြီး… အရှိုင်း လီးကိုဆွဲနုတ်၍ ဖင်ပေါင်ကို စတွေး ထွေးထည့်လိုက်ပါသည်…ပြစ်…။
ကိုမျိုးကတော့… မွန်မွန် အစုပ်ကောင်းမှုကြောင့်…. မိန်းနေဇဲ……။ မွန်မွန်တစ်ယောက် ဖင်ကိုအစိမ်းသက်သက်လို့ခံရတော့မယ်တာတွေး..ရင်း.. ကိုမျိုး ပေါင်ကိုတင်းတင်းကြပ်စုပ်ကိုင်ထားပြီး..ပေါင့်ကိုနဲနဲ ကားပေးရင်း.. အသင့်အနေ့ထား…ဖင်လိုးခံဖို့စောင့်နေလိုက်သည်….။ကို မျိုး ထန်လာပြီ……မွန်မွန်ခေါင်း ကိုဖိရင်း… စုပ်အားရပါးရစုပ်….. .ကိုမျိူးနောက်တစ်ချီပြီသွားလေပြီ။ အရှိုင်း.. ဖင်ဝမှာတေ့ထားတဲ့ လီးကို… အားနဲ့ဖိထိုးချလိုက်သည်…. သတ္တဝါနှင့်လက်နက်နှင့်မမျှသဖြင့်…ထိုးထည့်၍မရသည်ကတစ်ကြောင်း မွန်မွန်နာမှာကြောက်၍ ဖင်ပေါက်ကိုညစ်ထားသောကြောင့်ဖြသ်သည်။ အရှိုင်း အိတ်ထဲမှာပါလာသည့်….တုန်ခါစက်သည့်ပါလီတု ကိုထုတ်ပြီး မွန်မွန် စက်ပတ်ထဲ..ကို ခလုပ်နိပ်ထိုး ထည့်လိုက်ပြီး..မွန်မွန်စိတ်ပြင်းပြအောင်…လုပ်ရင်း ဖင်ဝမှာလီးကိုတေ့ လက်တစ်ဖက်က လုတုကိုကိုင်ပြီး ထုတ်လိုက်သွင်းလိုက်လုပ်နေပါသည်… ။
မွန်မွန်…လီတု၏တုန်ခါမှုနှင့်….ဟိုဘက်မွှေဒီဘက်မွှေကြောင့်.. ကာမအရာသာကိုအပြည့်အဝခံစားနေပြီး…. မိမိဖင်လိုးတော့မည်ဆိုတာကိုပင်သတိမရ….. ပါးစပ်က ညည်းညူသံနှင့် အတူ.. အဖုတ်မှာ…အရည်တရွဲရွဲနဲ့…ခံကောင်းကောင်း.မိန်းနေသည်။ မွန်မွန် စိတ်ထန်လာသည်နှင် အရှိုင်းလဲ တုန်ခါနူန်း မြင့်ပြီး လီးတုကို မွန်မွန်အဖုတ်ထဲ တဆုံးထိုးထည့်ပြီး မွန်မွန်ခါးကိုညစ်ပြီးလီးကိုဖိထိုးထည့်လိုက်တာ. အမေ…….ဖင်တော့ကွဲပါပြီ..မွန်မွန် လီတု၏တုန်ခါမှုနှင့် မွှေနောက်မှုက ခံလို့ကောင်းနေရင်း ဖင်ထဲလီးထည့်တာခံလိုက်ရတော့ လန့်ပြီးအော်ရင်း မျက်ရည်များပင်စီးကြနေသည်။ အမေရယ်သေပါပြီ……သမီးတော့..အဖုတ်ရောစက်ပတ်ရောကွဲပါပြီ……. အောက်ကလီးတုကမွှေနောက်နေလိုက်တာ…. နာကောင်းရီးဖြစ်နေသည်..။ အရှိုင်းကတော့…မွန်မွန်ဘယ်လိုဘဲအော်အော်…နာကြည်းနေသောစိတ်ကြောင့်မွန်မွန်ဖင်ကို…. အားစိုက်၍သာစက်လိုးနေသည်…။
နင်ဖင်အလိုးခံရတာကောင်း…လား…..ဖြန်း…. မေးနေတာဖြေလေ… မွန်မွန်အသံမထွက်နိူင်..လက်ဝါးဖြင့် ဖင်ကိုနောက်တစ်ချက်လက်ဝင်ဖြင့်အရှိုင်း ရိုက်၍ ထပ်မေးလိုက်သည်..ဖြန်း…ငါမေးနေတာမကြားဘူး…လား….ဖြန်း…ဖြန်း….။ အရိုက်လဲခံရ… လီတုကလဲ မွှေနောက်..နေ ဖင်ကလဲပတ်ပတ်ဆက်ဆက်အလိုးခံရနေသည့်ကြားမှာ… မွန်မွန်…မောဟိုက်၍ ပြန်မဖြေနိုင်….။ ဖြန်း……ဖြန်း…..ဖြန်း…….ဖြန်း…….ဖြန်း…… အရှိုင်းကတော့ မဖြေမခြင်းရှိက်နေဆဲ……. ဟုတ်ကောင်း…ကောင်းပါတယ်ရှင်…..ရှင်ကြိုက်သလိုလိုးပါ…..။ နောက်တစ်ခါငါ့ကို…အရင် လိုဆက်ဆံအုံးမလား….ဖြန်း….. အရှိုင်းကတော့ အလိုးကြမ်းကြမ်းဖြင့်လိုင်းရင်း….လက်ကမွန်မွန်တင်ပါးကို အားရပါးရရိုက်နေပါသည်။ ကြောက်ပြီလား..ဖြေစမ်း…။ ကြောက်ပါပြီ….အရှိုင်းရယ် နောက်တာခါ….အနိုင်မကြင့်တော့ပါဘူး….ကြောက်ပါပြီ…ကြောက်ပါပြီ……. ။…မွန်မွန်စက်ပတ်ရော အဖုတ်ရော….ကွဲသွားလေပြီ။
ကိုမျိုး… လီးနောက်တစ်ဖန်တောင်လာလေပြီ… အရှိုင်းခနနေအုံး…..။ မွန်မွန်လာစမ်း ငါ့အပေါ့ကတက်စောင့်ပေးစမ်းလို့ပြောရင်း ဘေးမှတုတ်ကိုစွဲယူလိုက်သည်…မွန်မွန်လည်း….ကိုမျိုးကိုကြောက်လှသဖြင့်….ကိုမျိုပေါ်တက်ခွပြီး စက်ပတ်…ထဲလီးလည့်ပြီးထိုင်ခြလိုက်သည်….နောက်ကနေ အရှိုင်းကလဲ အညိမ်မနေဘဲ ဖင်ထဲလီးတုထိုးထည့်လိုက်သည်….။ မွန်မွန်လေးငါးချက်ပင် ကိုမျိုးကိုကြောက်လို့သာစောင့်ပေးနိုင်တော့သည့်… အာမရှိ….လီးတန်းလန်းနှင့်…ကိုမျိုးကိုဖက်ထားလိုက်သည်….။ ဖေရယ်သမီးကိုသနားပါနော် သမီးမဆောင့်နိုင်..တော့ဘူး… အဖေကြိုက်သလိုသာလိုးပါ..သမီးခံပါမယ်… သမီး မဆောင့်နိုင်တော..လို့…အား……။ မွန်မွန်စကားမဆုံးခင်မှာဘဲ အရှိုင်းက ဖင်ထဲလီးတုကိုဆွဲနုတ်ပြီးအားဆိုက်ကာ..မွန်မွန်ဖင်ထဲ လီးကိုအဆုံးထိုးထည့်လိုက်သည့်…… စက်ပတ်ထဲမှာလဲလီးမှာလီးကပြည့်ကြပ်နေရတဲ့အထဲ… အရှိုင်းကပါ ဖင်ထဲလီးထိုးထည့်လိုက်တော့…။
မွန်မွန် ဘလိုမှပင်မခံစားနိုင်…မတက်သာတဲ့အခြေနေမို့…အော်ယုံပင်အပိုမရှိ..။ အရှိုင်းကတော့….မွန်မွန်ဖင်ကို မညာမတာ လိုးနေp….အချိန်တော်ကြာ… ဆောင့်ချက်များလာ သည်နှင့် မွန်မွန်တစ်ယောက်နာကြင်မှုနှင့်အတူ.နာကောင်းကြီးခံစားနေရpလေ… အား……ကောင်းတယ်လို့းလို့……ဖင်ကွဲရင်ကွဲပါစေ… အားရှိသလို့သာလိုးပါတော့အရှိုင်းရယ်….။ မွန်မွန် တစ်ညလုံး ကိုမျိုးနဲ့ အရှိုင်း ပတ်ပတ်ဆက်ဆက်လိုးပွဲဝင်ပြီး..အိပ်မောကြနေလေသည်…..။ မွန်မွန်ထစမ်း…ငါ့လီးစုပ်ပြီးစမ်း.. မွန်မွန်အိပ်ခြင်မူးတူးနဲ့ ကိုမျိုးလီးကို..မစုပ်ခြင်စုပ်ခြင်နဲ့ စုပ်ပေးနေရှာသည်….။အား..နောက်ကနေ အရှိုင်းက မွန်မွန် ဖင်ပေါက်ထဲလီးကို တစ်အားဖိလိုးခြလိုက်သည်..။ အားနာလိုက်တာ အရှိုင်း ရယ်ဖြေးဖြေးထည့်ပါ…အဲ့တာ့ စက်ပတ်မဟုတ်ဘူး ဖင်ပေါက်ဟဲ့…။ ဖင်ပေါက်လဲမလိုးရဘူးလား…နက်တို့မိန်းမတေက ဖက်ခံဖို့သက်သက်ဘဲမွေးလာကြတာ ရှာမရှည်နဲ့ အေးအေးဆေးဆေးညိမ်ခံနေ မခံလို့ကတော့ ညကထက်ပိုနာမယ်..။
အေးပါ..ငါကနင်တို့ရဲ့ ကျွန်မပါနက်တို့လုပ်ခြင်သလိုသာလုပ်ပါ…ဒါပေမဲ့ဖြေးဖြေး တော့လိုးနော်…။ မွန်မွန်နင်တော်တော်ရှာရှည်တာဘဲငါလီးကိုသေခြာစုပ်စမ်း… ဟုတ်ဖေဖေ… ။ အင်းဒီလိုပေါ့..ပါးစပ်ကလဲအညိမ်မနေနဲ့ ငါ ဖီးရှိအောင်ပြော …ဟုတ်.ကဲ့ပါ ဖေဖေရယ်…သမီးစုပ်တာကောင်းလားဟင်..။ အင်း..ကောင်းတယ်သမီးရယ်..စုပ်အားရ…အောင်သာစုပ်…..။ အနောက်ကနေ.. အရှိုင်းကလည်းမွန်မွန်ရဲ့ ဖင်ကိုတစ်ဝုန်းဝုန်းနဲ့ဆောင့်လိုးနေလိုက်တာ မွန်မွန် ခမျာအရှိုင်းကိုလဲကြောက်ရ ပထွေးကိုလဲ……ကြောက်ရနဲ့…အော်လဲမအော်ရဲ..နာလဲနာနဲ့ကြိတ်မှိတ်ပြီး ခံနေရင်း…ပထွေးလီးကို တပြွတ်ပြွတ်နဲ့ စုပ်နေပေးရရှာသည်..။ စုပ်..စုပ်…ဖေဖေ ပြီးတော့မယ်.သမီး.. မြန်မြန်လေးစုပ်…အား.ရှီး…ကောင်းတယ်စုပ်…..ပြီးပြီ…ပြီးပြီး.. ဆိုပြီး ကိုမျိုးလီးကိုမွန်မွန် ပါးစပ်ထဲကနေဆွဲနုတ်ပြီး မွန်မွန် မျက်နာပေါ် လရည်များသုတ်လိမ်းပြီး.။ ဒီလိုဘဲနေတိုင်း…သမီးကို…လရည်နဲ့ မျက်နာသစ်ပေးမယ်ကြားလား….။
ဟုတ်… ပထွေးကတော့ တစ်ချီပြီးသွားပြီမို့ အခန်းထဲကနေထွက်သွားမှဘဲ….။ အရှိုင်းရယ်နာလိုက်တာ…ဖြေးဖြေးလိုးပါ..နင်ငါ့မသနားဘူးလား။ အား…ကျွတ်..ကျွတ်…နားတယ်… ဖြေးဖြေးလိုးပါ..ရှိုင်းရယ်….,။ မွန်မွန် နင်ငါ့အပေါ်က တက်ဆောင့်ပေးစမ်း…။ နင်ကလည်းဟာ ငါညက တစ်ညလုံး နင်တို့ လိုးတာ ခံနေရတာ… ပင်ပန်နေပြီ. ဘလိုလုပ်ဆောင့်နိုင်မှာလဲ..။ နင်အသားမနာစေခြင်ရင် တက်ဆောင့်…။ အေးပါဟာ…ဆောင့်ဆိုဆောင့်ပေးပါမယ် ငါ့ကိုတော့မရိုက်ပါနဲ့နော် ငါအရိုက်ခံရတာတော်တော် နာနေလို့ပါ။ စကားကြောက ရှည်ပြန်ပြီ.. လာဟိုထက်လှည့်ပြီး ငါအပေါ်တက်ခွ.. လီကိုကိုင်ပြီး စက်ပတ် ဝမှာတေ့ပြီး ဖင်ထိုင်ချ..လိုက်..။ အွမ်း….. ။ မွန်မွန် လက်တစ်ဖက်ကလီးကိုကိုင် စက်ပတ်ကိုတေ့ မျက်စိဆုံမိတ်ပြီးဖင်ထိုင်ချလိုက်ပါသည်.။ အားလားလား..ရှီး ကောင်းလိုက်တာ နာပေမဲ့ ရမက်သွေးတေထကြွနေတဲ့မွန်မွန်တစ်ယောက်၁၀မိနစ်လောက် ပုံမန် ထိုင်လိုက်ထလိုက်နဲ့ စောင့်ပေးနေရင်း…။
အရှိုင်း ငါမောလာပြီဟာ….ငါမဆောင့်နိုင်တော့ဘူး….. ဖြန်း…ဘာမဆောင့်နိုင်တာလဲ မြန်မြန်ဆောင့်…ဖြန်း….နှေးလို့ကတော့သေမယ်…ကဖြန်း။ လက်ဝါးကြမ်းကြီး ဖြင့် အရှိုင်း ရိုက်လိုက်တော့မှ..မွန်မွန် ထပ်တွန့်မတက်တော့ဘဲ ဆောင့်မြဲဆောင်နေရသည်။ ဖြန်းး…မြန်မြန်ဆောင့်စမ်း…ဖြန်း…မြန်မြန် စောင့်ပေးနေသော်လဲ အရှိုင်း ကတမင်တကာ ရိုက်နေသည်…နာပေမယ်လို့…အရိုင်းခံနေရတာကိုက မွန်မွန် အတွက် ဖီး ဖြစ်နေသည် …. ဖြန်း…ဆောင့်..ဖြန်း. မြန်းမြန်ဆောင့်…ဆောင့်….ငါထန်လာpမြန်မြန် ဆောင့်…ဖြန်း..ဖြန်း..ဖြန်း…ဆောင့်စမ်း. ဆောင့်စမ်း..ဆောင့်စမ်း…….။ ပြီးတော့မယ်ဆောင့်ဆောင့် အား…ရှီးး…ကောင်းလိုက်တာ မွန်မွန်ရယ်…ဘာအ ခုမှကောင်းတာလဲ…သူများကို မညှာမတာရှိက်ပြီးမှကောင်းတယ်လာမလုပ်နဲ့….ဒီမှာညောင်းလဲညောင်းနေပြီး တင်ပါတေလဲနီရဲနေပြီ….။ ငါလီးက ခံလို့ကောင်းလား…မွန်မွန်..။ မကောင်းဘူး..။
အေးတွေ့ကြသေးတာပေါ့ မသာမ ငါလီကို ဂေါ်လီထည့်ပြီး ပါဝါတင်ပြီးမှ နှင် စက်ပတ်ကောဖင်ကောကွဲအောင် ထပ်လိုးပြမယ်။ စမီးကစတာကို…ကိုကိုကလည်း….. Noပါ စမရယ် အန်ကယ်ကတော့ noပါ..နောက်တစ်ခါလိုးရင် ဖင်ကွဲဖို့သာပြင်ထား…။ သွားရေသွားခြိုးတော့။ မွန်မွန် ရေချိုးခန်းထဲဝင်ရင်း မိမိဘဝကိုတွေးရင်းတစ်ရုံ့ရုံ့နဲ့ငိုပွဲဝင်နေရရှာသည်။ ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကို သူ့အမေပြန်လာ အားလုံးဖွင့်ပြောလိုက်မည်ဟုစိတ်ကရေရွတ်ရင်…မိခင်ပြန်လာတဲ့အချိန် ထိတော့ထား၍သာ စောင့်နေရရှာလေသည်…။ မေမေ ရယ် ပြန်လာပါတော့..။သမီး ဘဝကိုလာကြည့်ပါအုံးမေမေ ရယ်။ ဟဲမွန်မွန် ရေချိုးတာကြာ လိုက်ရီလား….။ ဟုတ်..ပြီးပြီ ပြီးပြီ…။ ရေချိုးပြီးရင် ငါ့စီမြန်မြန်လာခဲ့…။ ဟုတ်..။ ထိုစဉ်…. ဟလို….ဗျာ..ဟုတ်ကဲ့..ဟုတ်ကဲ့.။ ကံမကောင်းရှာတဲ့ မွန်မွန် ဘဝ…. မွန်မွန်အမေ ကား အဲ့စီးဒင့်ဖြစ်ပြီး အောက်ပိုင်းသေသွားရရှာလေသည်။ မွန်မွန်အားကိုးရမဲ့လေပြီ….။
ကိုမျိုးကလည်း မွန်မွန်အမေလစ်ရင် လစ်သလို လီစုပ်ခိုင်းလိုက် လိုးလိုက်နဲ့ မွန်မွန်ခမျာ မိခင်စိတ်ဆင်းရဲမှာဆိုး၍မပြောပြနိုင်ခဲ့..။ တနေ့တော့ ကိုမျိုး အရက်တေ အလွန်အကျွန်သောက်လာပြီ… မွန်မွန်အမေ ဒေါ်ခင်ကြည်ကို.. ခင် ကိုတို့မလိုးဖြစ်တာတောင်ကြာပြီ..ဒီနေ့ ကိုခင်ကိုလိုးမယ်…။ ပြောရင်းဆိုရင်း ကိုမျိုးက ခင် ရဲ့ထမီ ကို စွဲချွတ်လိုက်သည်.. ဟာ ကို သမီးလေးမြင်သွားရင် မကောင်းပါဘူး…။ မြင်ပစေကွာ..ဒီမှာငါမနေနိုင်တော့ဘူး……။ ကိုမျိုးက ခင်ရဲ့အင်္ကျီပါစွဲချွတ်လိုက်သည်..။ကိုကလည်းကွာ ရှက်စရာကြီး ယခုတော့….ဒေါ်ခင်ကြည် ကိုယ်ပေါ်မှာ အဝတ်စားမဲ့နေpလေ..။တစ်ခါမလုပ်ဘူးသောကိုမျိူးရဲ့အပြုအမှုထူးဆန်းနေသော်လည်း….ကိုမျိုး အပြူအမှုကို…..ဒေါ်ခင်ကြည်နှစ်သက်နေသည်…။ ဟာ..ကိုကလည်းရှက်စရာကြီး သမီးမြင်သွားရင်မကောင်းဘူး… မြင်ပစေကွာ….ပါးစပ်ဟထား…..။ ဘာလုပ်မလို့လဲ…။ ငါ့လီးကို့စုပ်ပေးရမယ်လေ… ဟာ…ရွံတယ်ကွာ….။
ကိုမျိုးကတော့ ခပ်ကြမ်းကြမ်းပင် ခက်ပါးစပ်ထဲ လီကို ထိုးထည့်လိုက်သည်.။ သေခြာစုပ်……ရှာကအညိမ်မနေနဲ့သေခြာစုပ်စမ်းပါ…..။ နင်စုပ်တာကလဲ အရသာမရှိလိုက်တာ…..။ ကိုမျိူး ဒေါ်ခင်ကြည် ခြေထောက်ကိုကိုင်ပြီး ဆွဲလည့်လိုက်သည်( ဝမ်းလျားမှောက်အနေထား) ခေါင်းအုံးနှစ်လုံးဆွဲ ယူပြီး ဒေါ်ခင်ကြည် အောက်မှာခုပေးလိုက်သည်… အခုတော့ဒေါ်ခင်ကြည် လေးဘက်ကုန်းထားသလို ဖင်ကိုအနှောက်မှာပြစ်ပြီးစပတ်ရောဖင်ပါ စူထွက်နေသည်…။ ကိုမျိုးက အပေါ်ကနေ တက်ခွပြီး… ခင်ရဲ့ ဖင်ဝမှာလီးကိုတေ့ ထားရင်း…ထိုးထည့်ဖို့ပြင်နေသည်….။အား..နာတယ်မလုပ်နဲ့….နာတယ် မလုပ်ပါနဲ့ကိုရယ်။ ဒေါ်ခင်ကြည့်..သမီးတစ်ယောက်သာမွေးလာတာအခုထိ ဖင်မခံဘူးသေး…..။အာ့ကွပြ်ီ….။ မွန်မွန် ရေမွန်မွန်….ဘာလုပ်နေတာလဲဒီကိုလာစမ်း..။ ဟုတ်လာပါပြီ…. ကိုမျိူးမွန်မွန်ကိုလှမ်းခေါ်လိုက်တော့….. ဒေါ်ခင်ကြည် မျက်လုံးပြူးသွားသည်။ ကို ဘာလို့သမီးကိုခေါ်တာလဲ..။
နင့်ကိုလိုးကတာ..အရသာမရှိလို့.မွန်မွန်ကိုလို့မလို့….မွန်မွန်တခါးဖွင့်ပြီးဝင်လာသည်….ကိုမျိုးက သူအမေ ဖင်ကိုလိုနေတာ….အမေကိုယ်ပေါ်မှာလဲ အင်္ကျီ အဝတ်မရှိ….။မွန်မွန် မျက်စိလေးကလည် ကလည်နဲ့…၊၊ ဘာလုပ်နေတာလဲ အဝတ်စားတေချွတ်စမ်း…. ။ ကိုမျိး သမီးကို မဟုတ်တာတေလုပ်မခိုင်းနဲ့…. အမေရှေ့မှာ အဝတ်ချွတ်ခိုင်းတာဆိုတော့မွန်မွန် အလွန်ပင်ရှက်နေသည်….။ဟဲ့ ပြောနေတာမကြားဘူးလား….။ ရှင် ရှင် လူရုပ်မာကျွန်မသမီးကို မဟုတ်တာတေလျှောက်မလုပ်ခိုင်းနဲ့..။ ဒီမိန်းမတော်တော် ရှာရှည်တာပါ…ဖြန်း…။ မွန်မွန် နင်ကိုချွတ်လို့ပြောနေတာ..နားမပါဘူးလား….။ မွန်မွန်မချွတ်ချွတ်ခြင်နဲ့ ချွတ်နေရရှာသည်။ ငါ့လီးကိုနင်အမေရှေ့မှာ စုပ်ပေးစမ်း….။ မတက်သာတော့..မွန်မွန် စုပ်ပေးရရှာတာပေါ့…မွန်မွန်အမေကတော့ ကိုယ့်ရှေ့မှာကိုသမီးက သူများလီးစုပ်ပေးနေရတော့…သမီးဘဝကိုကြည့်ရင်း…အဖြစ်ဆိုးလိုက်ချည်လားသမီးရယ်….။
စုပ်သေခြာစုပ်… ဟုတ်….ဘလိုလဲအရသာရှိလား ဟုတ်ရှိပါတယ်။ ကိုမျိုးဗီိတိုထဲက တုန်ခါစက် ပါလီးတုကိုစွဲနုတ်လိုက်ပြီး….. ဒေါ်ခင်ကြည့်ဖင်ထဲ ထိုးထည့်လိုက်သည်…. အို…. နာလိုက်တာ…ကျွတ်..ကျွတ် လီကြီးက ဒေါ်ခင်ကြီး ဖင်ထဲ ဟိုဘက်ကလိ ဒီဘက်ကလိနဲ့… ဒေါ်ခင်ကြည်..အရသာထူးကို ခံစားနေရလေသည်.. .။ မွန်မွန်နင်အမေပေါ်တက်ပြီးဖင်ကုန်းထားစမ်း….။ ဟုတ်….။ မွန်မွန်သူအမေပေါ်တက်ပြီး ဘေဘက်ကုန်းလိုက်သည်..သားမိနှစ်ယောက်လုံး ထပ်လျှက် လေးဘက်ကုန်းနေရသည့် အနေထား..။ မွန်မွန်.. ရှန်ဖေ….။ နင့်စက်ပတ်ကိုအရင်လိုးရမလား..ဖင်ကိုအရင်လိုးရမလား..။ လိုးခြင်တာသာလိုးပါ ဖေရယ်….. အာ့ဆို စက်ပတ်ကိုအရင်လိုးမယ်နော်.. ဟုတ်.. အား….နာတာ့…အား….အဖေ…နာတယ် အား…သေပါပြီအမေရယ်….သေပါပြီ…… သားမိနှစ်ယောက်လုံး…..ညည်းသံးလေးတေကစည်းနဲ့ဝါး လို့ညည်းညူရှာနေသည်…သားမိနှစ် ယောက်တစ်ယောက်လက်တစ်ယောက် စုတ်ရင်း…..ကာမအရသာ ကိုအပြည့်အဝခံစားနေရရှာသည်။
ဒေါ်ခင်ကြည်.ရဲ့ဖင်တဲ့ကလီးတုကြီးကလည်း တကြီကြီဘအော်မြည်ရင်း…ဖင်ထဲမှာဟိုဘက်လိမ် ဒီဘက်လိမ့်နဲ့….ဒေါ်ခင်ကြီ အပေါ်ကသမီးကိုပင်မရှက်နိုင်…. အား..ကောင်းတယ်.. မွန်မွန်ကလည်း… ကောင်းတယ်ဖေ..မြန်မြန်လိုးသမီးပြီးတော့မယ် လိုးလိုး…အားအမေကောင်းတယ် လိုး…လိုး..ရှီးကောင်းတယ်ဖေ.. ဖေလဲပြီးတော့မယ်အား.သုံးယောက်သားသံပြိုင်ပင် ပီးသွားလေသည်.။ အခုတော့..မွန်မွန်တို့သားမိနှစ်ယောက်လုံး..ကိုမျိုးကို မလွန်ဆန်နိုင်ဘဲ.. ကာမကျေးကျွန်တေ ဖြစ်နေရှာလေသည်။ ကိုမျိုးကတော့ တစ်နေ့တစ်မျိုးမရိုးရအောင်..သားမိနှစ်ယောက်လုံးကို လိုးရင်း ပိတိဖြစ်နေသည်..။ ဒေါ်ခင်ကြည်ကတော့..မွန်မွန်နဲ့အတူတူ အလိုးခံရတဲ့နေ့မှ စပြိ်း အဝတ်မဝတ်ရဟုကိုမျိုက ပြောထားသဖြင့် ကိုယ်တုံးလုံးနဲ့ပင် ကုတင်ပေါ်မှာ လဲနေရရှာသည်..။ အချိန်ကြာလာတော့ ဒေါ်ခင်ကြည်..အဝတ်ဘလာနဲ့နေရသည် နေသားပင်ကြနေသည်..။
မွန်မွန် ဒေါ်ခင်ကြည်ဆေးတိုက်ဖို့ အခန်းထဲဝင်ရင်း သူ့အမေရဲ့ဘဝကို စိတ်မကောင်းဖြစ်နေသည်။ ဒေါ်ခင်ကြည်ကတော့ တစ်နေ့နေ့.သူ့ရှေ့မှာကိုမျိုးက သူမလိုးဘဲ သူဖင်ထဲလီးတုကိုထိုးထည့်ပေးပြီး.မွန်မွန် ကိုသာလိုးပေးနေတော့..လီတုနဲ့အာသာမပြေ..။ အခုလဲကြည့်..သု့အဖုတ်ထဲလက်နိုက်အာသာဖြေရင်း…. အိပ်မောကြနေလေသည်..။ မွန်မွန်က သူ့အမေ အဖုတ်ထဲက လက်ကိုဖယ်ပြီး..အမေ့အဖုတ်လေးကို..မရွံမရှာ..လျှာလေးနဲ့.. ယက်ပေးနေသည်..ဒေါ်ခင်ကြည် ခါးပင်ကော့တက်သွားသည်။ အိပ်နေရင်း…အိပ်မက်လိုလို ဘာလိုလိုနဲ့ လန့်နိုင်းရင်း ပေါင်ကြားထဲကြည့်လိုက်တော့… သမီးရယ်..မလုပ်ပါနဲ့… ပါးစပ်ကမလုပ်ပါနဲ့သာပြောတာလက် မွန်မွန်ခေါင်းကိုအတင်းဖိးရင်း…အားရှီးအို..ကောင်းလိုက်တာသမီးရယ်…လျှာကလေးနဲ့အဖုတ်လေးထဲထိုးထည့်ပြီးဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နဲ့လိုးပေးရင်း…သူအမေအရသာတွေ့နေတာကိုကြည့်ပြီးပီတိဖြစ်နေသည်။
မေမေ ကောင်းလား… အိုဘလို များမေးလိုက်တာလဲ သမီးရယ်ကောင်းတာပေါ့…. အာ့ဆိုသမီးနေ့တိုင်း..ယက်ပေးမယ်နော်။ အား…အစိလိုကိုရပ်…အား..ရှီး…ကောင်းလိုက်တာ…။ပြီးတော့မယ်…ရှီး ရပ် ရပ်…..အား…ကောင်းတယ် ပြီးပြီ.ပြီပြီသမီး.. မွန်မွန်က သူ့အမေအဖုတ်ရည်တေကိုအကုန်ရပ်ပြီးမျိုခြလိုက်သည်။ အောင်မယ် ဒီသားအမိဟုတ်လိုက်ချည်လား…..။ ဖေ ဘယ်တုန်းထဲက ပြန်ရောက်နေတာလဲ… ဘယ်အချိန်ရောက်ရောက်ပေါ့….။ဟုတ်ပီ အကြံရပီ…. မွန်မွန်အဝတ်တေချွတ်.. ဟုတ်။ ပြီးရင်နင်အမေ မျက်နာပေါ်တက်ခွပြီး လေးဘက်ကုံးထား…ဟိုကောင်မ နင်ကနင့်သမီး စောက်ပတ်ကိုလျှက်ပေးလိုက်…။ ဖေရယ်အဲ့လို မလုပ်ခိုင်းပါနဲ့ သမီးငရကြီးမှာပေါ့..သမီးကိုကြိုက်သလောက်လိုးပါ..မေကိုတော့ သမီးစက်ပတ်တော့မရပ်ခိုင်းပါနဲ့။ ဘာလဲနှစ်ယောက်စလုံးနာခြင်လို့လား…..။ ဦးမျိုးရေ ဦးမျိုးရေ…. ဟေဘသူလဲကွ…. ကျွန်တော် ”အရှိုင်း”ပါ..။ အေးတူရီးလာတာနဲ့ အတော်ဘဲလာအခန်းထဲဝက်ခဲ့….။
နင်တို့သားအမိ ဒီနေ့တော့လီးအရသာကို ကောင်းကောင်းကြီး..ခံဖို့သာပြင်ထား….။ ဟာဦး ကောင်းလိုက်ရီလား..ကျွန်တော်လဲ ရှယ်ရာဝင်မယ်လေ ။ မွန်မွန် နင့်အမေ့မျက်နှာပေါ်တက်ခွလို့ ပြောနေတာမကြားဘူးလား…. ဟုတ်…။ မွန်မွန်သူအမေမျက်နှာပေါ်တက်ခွပြီး လေးဘက်ကုန်းထားလိုက်သည်..။ ဟိုကောင်မ…နင့်သမီး စက်ပတ်ကိုရပ်ပေးလိုက်စမ်း အိုး…မေ…ရှီး…ကျွတ် ကျွတ်…။ မွန်မွန် ဒီမှာကြည့်စမ်း..ငါ့လီးကို…အရှိုင်းက ဂေါ်လီထည့်ပြီး.ပါဝါတင်ထားတဲ့သူရဲ့ လီးကြီးကိုထုပ်ပြလိုက်သည်…။ လီးတစ်ချောင်းလုံး အဖုအထစ်နဲ့…အလွန်ပင်ကြီးမှလှတဲ့ အရှိုင်း လီးကိုကြည့်ပြီး..မွန်မွန် မျက်လုံး ပြူးသွားသည်..။ အရှိုင်း မင်းငါ့မိန်းမလိုးမှာလား..မွန်မွန်ကိုလိုးမှာလား….. မွန်မွန်ကိုအရင်လိုးမယ်. သားကမွန်မွန်ကိုလိုပေး…အန်တီက မွန်မွန်စက်ပတ်ကိုသေခြာလျက်ပေး…ဦးက နောက်ကနေ…အန်တီကိုလိုးပေါ့ မကောင်း…ဘူးလား….အေးမဆိုးဘူးကွဒီအကြံ…။
အရှိုင်းကမွန်မွန်အပေါ်တက်ခွပြီး…လိုးရင်အသင့်…ကိုမျိုးကလည်း….ဒေါ်ခင်ကြည်စက်ပတ်ဝမှာလီးကိုတေ့ပြိ်း လိုးရန်အသင်ပင်။ မွန်မွန် သေခြာကိုင်ထားနော်..နဲနဲနာမယ်..အန်တီကသေးခြာရပ်ပေး အဲ့တာမှနာကြင်မှုပြောက်မှာ….။ ထည်ပြီနော်မွန်မွန်…။ အရှိုင်းစတင်လီးကို..မွန်မွန်ဖင်ထဲ ထစ်မြုတ်ယုံမြ သွင်းလိုက်သည်… အိုး..အား…သေးပါပြီ…အမေရယ်….ကွဲပြီ… မွန်မွန်ဖက်က သွေးတေထွက်ကြလာသည်…ဒေါ်ခင်ကြည်ကလည်း သူ့သမီးနာကြင်မှုဝေဒနာ..ပြောက်အောင် အစွမ်းကုန်လျှပ်ပေးနေရှာသည်..အောက်ကလည်းကိုမျိုးကလည်း စတက်လိုးနေပြီ….။ အား…အမေသေပြီ….အား..ကွဲပြီ.. မွန်မွန် စံချိန်တင်လီးကြီးရဲ့ဒဏ်ကိုမခံနိုင်ပါ. သို့ပေမဲ့လို့…သူ့အမေအလျှပ်ကောင်းမှူကြောင့်. ရမက်သွေးတွေ ထကြွပြီး..ဖင်ကနာ..စက်ပတ်ကအရသာကောင်းနှင့်..တစ်အားအားနဲ့သာ..။ဒေါ်ခင်ကြည်ကလဲလီနဲ့ဝေးနေတာကြာပြီ မို့ ကိုမျိုးလိုးနေတာကို ဖီလ်း တက်…။
အားနာတယ်…မေမေ သမီးစက်ပတ်ကို မလျှပ်ဘဲဘာလုပ်နေတာလဲ…သမီး သေတော့မယ်. အား…သေပါပြီအမေရယ်…။ အေးအေး အမေလဲအလိုးခံနေရလို့ပါ…မရဘူလျှက်…မြန်မြန်လျှပ်မွန်မွန်ကတစ်အားအားနဲ့သာအော်နေတာ..အရှိုင်းလီးကတစ်ဝက်ပင်ဝင်နေသေးသည့်..အနောက်မှာခေါ်လီကြီးနေတယ်စွံကားနေတော့လီးက အဆုံးမဝင်သေး။ ဖေဖေ မေမေကိုနာနာလို သမီးကို မလျှပ်ပေးဘူး…။ ဖြောင်း…ဟဲ့ကောင်မ လျှပ်ပေးလိုက်စမ်းနင့်သမီးကိူ မလျှပ်ရက်ပိုနာမယ်….။ ကာမ ဘဝထဲမှာမွန်မွန်သူ့အမေ့ကိုလဲ အမေမှန်းမသိတော့…သူ့ကောင်းကောင်း ခံစားဖို့သာ စိတ်ထဲမှာရှိသည်။ ဦးမျိုး ကျွန်တော် အိတ်ထဲမှာလီးအတုအသစ်ထွက်လို့ဝယ်လာတာပါတယ် အဲ့ မွန်မွန်အဖုတ်ထဲ ခလုပ်ဖွင့်ပြီးထိုးထည့်ပေး…. အိုလီးတုကလဲ အကြီးကြီးပါလား ကိုမျိူးမွန်မွန် စက်ပတ် ထဲလီးတုကြီးကိုထိုးထည့်လိုက်သည်။ ဟဲ့ကောင်မ နင်သမီးစက်ပတ်ကိုလီးတုကိုင်ပြီး လိုးပေး..။
ပါးစပ်ကလည်းသေခြာယက်အို…ကျွတ်…မွန်မွန်ဖင်ကလီးတစ်ချောင်း..စက်ပတ်မှာလီးကတစ်ချောင်း…အမေကစက်ပတ်လျှပ်ပေနဲ့…..နာကောင်းကြီးဖြစ်နေသည်…။ အားအမေ မြန်မြန်လျှပ်ကောင်းတယ်…လျှပ်….ရှီး..။ အရှိုင်း မွန်မွန်ခါးကိုကိုင်ပြီး…လီးကိုတစ်ဆုံးထိုးထည့်လိုက်သည်… အိုး…သေပါပြီ….အား…အမေ…သမီး ဖင်ကွဲပြီ ဘွတ်…ဘွတ်… အားမလေး..သေပါပြီ…ကွဲပြီ… ဘလို လဲ ကောင်းလား ငါလိုးတာကောင်း လားမွန်မွန် မွန်မွန်ပြန်မဖြေနိုင်.. ဖြောင်း..ဟဲ့ဖြေစမ်း.. ကောင်းတယ်…ကောင်းပါတယ်ရှင်… အေးအဲ့တာဆို ညိမ်ခံနေဟုတ်ပြီလား..။ အချက်သုံးဆယ်လောက်…လိုးရင်း..အရှိုင်းလိုးချက်တေက ပိုမိုမြန်ဆန်လာသလိုမွန်မွန်လဲနာကြင်မှုအနည်းငယ် ပြောက်လာပြီး ကာမအရသာထူးတွေ့နေပြီ….ကိုမျိုကလည်း…ထန်လာပြိ် မွန်မွန်အမေလဲတော်တော် ကောင်းနေပြီ။ အား..ကောင်းတယ်..လိုး…လိုး…..အရှိုင်း လိုးလိုး…..မြန်မြန်လိုး….ကိုမျိုးရေ.. ကောင်းလာပြီ အသကုန်လိုးတော့..။
အားးး ရှီး…အားပီးပီ..ပီးပီး…။ လေးယောက်သားကုတင်ပေါ်မှာ အမောဖြေရင်း…မွန်မွန်က အရှိုင်းရင်ခွင်ဝင်..ဒေါ်ခင်ကြည်ကလဲ ကိုမျိုးရင်ခွင်ထဲမှာတစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက်ကြည့်ရင်း..ပတိတေဝေဖြာရင်း… ပျော်ရွှင်စရာမိသားစု ဘဝလေး..မှာ…မနက်ဝေလီဝေလင်း…နေ့တစ်သစ်ရဲ့….အလင်းရောင်နဲ့အတူ… ပျော်ရွှင် ပြုံးပျော်နေကြလေသည်…။ အရှိုင်း လှကိုချစ်လား ဟင်….။ချစ်တာပေါ့….။ အဲ့တာဆို လှ ကိုလိုး ရင် မညှာမတာဘာလို့လိုးတာလဲ။… အာ့မှ ဖီး ပိုရှိလို့…ဘာလဲ လှက ခံရတာမကောင်းဘူးလား…မကောင်းရင် လီးကို ဂေါ်လီထပ်ထည့် ပြီး.. ပါဝါထပ်တင်လိုက်မယ်လေ…။ ဟိုဆရာ..ဟိုးကောင်းတယ်…အရမ်းကောင်းတယ် မွန်မွန် စကားအဆုံးမှာ ကိုမျိုးနဲ့ ဒေါ်ခင်ကြည်ပါတဟားဟားနဲ့ ပြုံးပျော်ရင်း…. ပြီးပါပြီ။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged မညှာမတာ